YEYINTNGE(CANADA): Sunday, May 25
At Sunday's meeting:
_The European Community, which has already pledged euro46 million (US$72.5 million), offered another euro17 million (US$26.8 million).
_China boosted its pledge to US$11 million (euro7 million).
_Australia pledged 25 million Australian dollars (US$24 million; euro15.2 million).
_The Philippines doubled its previous pledge to US$20 million (euro12.7 million).
_South Korea upped an earlier pledge foratotal of US$2.5 million (euro1.6 million).
Official estimates put the death toll at about 78,000, with another 56,000 missing. Myanmar has estimated the economic damage at about US$11 billion (euro7 billion) and the United Nations has launched an emergency appeal for US$201 million (euro127.7 million).
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/25/20080အကြံပြုခြင်း
"လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော ဖုန်းမှာ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပတွင် ရောက်ရှိနေပါသဖြင့်" စသည့် အသံမျိုးကို မြန်မာအများစု ကြားဖူးကြပါလိမ့်မည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ တယ်လီဖုန်းအများစုက သာမန်အချိန်တွင်ပင် ကောင်းကောင်း ဆက်သွယ်၍မရတတ်ကြပါ။ ယခုလို မုန်တိုင်းတိုက် ပြီးကာလတွင် ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စများက ပို၍ ဆိုးပါတော့သည်။
စစ်အစိုးရ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်သိန်းစိန်က ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ စတော့မည်ဟု ထိုင်းဝန် ကြီးချုပ်ကို ပြောခဲ့သည်။ ယုံကြည်ရ ခပ်ခက်ခက်ပင် ဖြစ်သည်။ အခြားသတင်းများတွင် ပြဿနာများက မကြားချင်မှအဆုံး။ အကူအညီများ ဖြန့်ဖြူးပို့ဆောင်ရန် အတွက် အတတ်ပညာ၊ နည်းပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ လူအင်အား သူတို့ထံတွင်ရှိသည်ဟု ဆိုသေးသည်။ နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေး လုပ်သားများ မလိုဟုလည်း ကန့်သတ်ပိတ်ပင် နေသေးသည်။ သို့သော်လည်း ၀န်ကြီးချုပ်ဆိုသူ ဗိုလ်ချုပ်သိန်းစိန်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ခန့်ခွဲနေသည့် အမျိုးသား သဘာဝဘေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဗဟိုကော်မတီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုများတွင်ပင် ကမောက်ကမဖြစ်ရပ်များ၊ လိုအပ်ချက်များ အများအပြား တွေ့နေရပါသည်။
အခြားကိစ္စများ ထားဦး။ ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတခုကိုပင် ကြည့်၍ မိမိထောက်ပြလိုသေးသည်။ ယခုလို ကပ်ဘေးဒုက္ခကြီးက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သာမဟုတ်။ ကမ္ဘာအတွက်ပါ အတန်ကြီးမားသည့်၊ လူအသေအပျောက် များပြားလွန်းလှသည့် ကပ်ဘေးဒုက္ခကြီး ဖြစ်သည်။ ဤသဘာဝကပ် ဘေးကို နိုင်ငံတကာ အစိုးရများနှင့် ပြည်သူများက စိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါသည်။ သတင်းထူးခြားချက်များကို သိလိုနေကြသည်။ မြန်မာလူမျိုးများ အ တွက်ဆိုလျှင် ကြိမ်မီးအုံးမျှ၊ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများအတွက် ပူပန်ကြသည်။ နိုင်ငံသား မိမိလူမျိုးအချင်းချင်းအတွက် ပူပန်နေကြပါသည်။ မိမိကိုယ် တိုင်ပင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မိသားစုများကိုပင် ယခုတိုင် ဆက်သွယ်၍ မရသေးပါ။
ဤအခြေအနေတွင် နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအတွက် "ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ" မထားရှိပါ။ သတင်းပြန်ကြား ထုတ်ပြန်ပေးနေမည့်ဌာနမျိုး သူတို့ဖွဲ့စည်းထားသည်ဆိုသည့် အမျိုးသားသဘာဝ ဘေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး ဗဟိုကော်မတီတွင် ရှိမနေပါ။ ယခင်က ကုလအထူးသံ ဂမ်ဘာရီလာစဉ်က ထွက်ထွက်ပြောနေသည့် "ပြောရေးဆိုခွင့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့" က မည်သည့်နေရာ ရောက်နေမှန်း မသိရပါ။ နေ့စဉ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများလည်း မတွေ့ကြရပါ။ ဤကိစ္စများ ထားလိုက်ဦး။ မိမိတို့တဦးချင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်မည့် ဟော့လိုင်း (Hotline) ခေါ် ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်မည့်ဌာနများလည်း ဖွဲ့စည်းထားရှိခြင်း မရှိပါ။
ဤကိစ္စမျိုးက အစိုးရတခုအတွက် ခက်လှသည်ဟု မထင်ပါ။ သို့မဟုတ် သာမန် အဲန်ဂျီအိုအဖွဲ့အစည်းတခုကပင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ - နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ရှိနေသည့် ဆွေမျိုးသားချင်းများက မြန်မာနိုင်ငံရှိ အရေးပေါ်ဖုန်း (Hotline) နံပါတ်တခုကို ဆက်သွယ်မည်။ ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းလွတ် - မလွတ် စုံစမ်းနိုင်မည်။ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်နိုင်မည်။ အကူအညီလိုအပ်ပါကလည်း အကူအညီ ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဖုန်းလိုင်းကြိုးများ ပြတ်တောက်နေသည့် အထူးသဖြင့် ယခုလိုကာလတွင် ဤကဲ့သို့ ၀န်ဆောင်မှုမျိုးက အထူး လိုအပ်ပါသည်။ ဤဌာနတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအများအပြား ထားရှိနိုင်ပြီး ထိုသူများက လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်စုံစမ်းပေးခြင်း၊ ပြန်ကြားပေးခြင်း၊ ရှာဖွေပေးခြင်းများ လည်း ပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ-ဆိုပါစို့။ လပွတ္တာရှိ လူတဦးက အခြားဒေသရှိ မိတ်ဆွေ၊ ဆွေမျိုးများရှိနေပါက အကူအညီ တောင်းခံနိုင်မည့်အပြင်၊ အခြားဒေသရှိ သူများကလည်း ကပ်ဘေးသင့် ဒေသရှိ မိမိတို့ အသိအကျွမ်းများကို ဆက်သွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်။ အပြန် အလှန် ကူညီပေးနိုင် ကြပါလိမ့်မည်။ "ကျန်းမာ သက်ရှင် ရှိနေကြောင်း" သိရ၍ သက်ပြင်းသက်မ ချနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ယခု ၁၉ ရက်တိုင် လာသည့်တိုင် ဤကဲ့သို့ ၀န်ဆောင်ကူညီပေးမှုမျိုး မတွေ့ရ ပါ။ (BBC) မြန်မာပိုင်းဌာနက တတ်နိုင်သမျှ ၀န်ဆောင်မှုပေးနေသော်လည်း အစိုးရပိုင် ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယို၊ သတင်းစာ များက အလားတူဝန်ဆောင်မှုမျိုး လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း မရှိပါ။
ဤသို့ဖြင့် ယခုတိုင် မိမိဖုန်းဆက်တိုင်း ဆက်သွယ်ရေး ဧရိယာပြင်ပသို့ ရောက်နေသည်ကို ကြုံနေရပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးရှိ လူထုများလည်း ဆက်သွယ်ရေး ဧရိယာပြင်ပသို့ ရောက်နေကြရပါသည်။ ကပ်ဘေးသင့်ဒေသရှိ သန်းနှင့်ချီသည့် အိုးအိမ်မဲ့ ဒုက္ခသည်များသည်လည်း ဆက်သွယ်ရေး ဧရိယာပြင်ပသို့ ရောက်နေကြပါသည်။ နောက်ဆုံး စစ်အစိုးရက လူလူချင်းစာနာမှု ကင်းမဲ့စွာ နိုင်ငံတကာအကူအညီများကို ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားသော ကြောင့် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးသည်ပင် ဆက်သွယ်ရေး ဧရိယာပြင်ပသို့ ရောက်နေကြရပါသည်။
ယခုလို အကူအညီပေးရေးကိစ္စတွင်ပင် နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်ဆံရေး မည်မျှညံ့ဖျင်း၍ စစ်အစိုးရ၏ စဉ်းစားချက်များ မည်မျှခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲနေ သည်ကို တွေ့နေကြရပါသည်။ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ အကူအညီအဖွဲ့များကိုသာ ရွေး၍ လက်ခံမည်။ အနောက်နိုင်ငံများကို မယုံသင်္ကာစိတ်နှင့် ပယ်ထားသည်ကို တွေ့နေရပါသည်။ စစ်အစိုးရ၏ ကမ္ဘာ့အမြင်ကိုပါ ဆက်၍ တွက်ဆနိုင်သေးသည်။ ဤသို့သော ကမ္ဘာ့အမြင်မျိုးဖြင့် မည်သို့ နိုင်ငံတကာနှင့် ကုန်သွယ်ကြပါမည်နည်း။ မည်သို့ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါမည်နည်း။ ဤသို့စီမံခန့်ခွဲပုံမျိုးနှင့် ဆိုလျှင် အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့်သာ ကုန်သွယ်စီးပွား လုပ်ကြတော့မည်လော။ အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်ဆက်ဆံ မလုပ်ကြတော့ပြီလော၊ စဉ်းစားဖွယ် ဖြစ်လာပါသည်။ ပို၍ အကျယ်အပြန့်စဉ်းစားလျှင် စစ်အစိုးရက ကမ္ဘာလွှမ်းပတ်ဆက်သွယ်မှု (ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း) မှပါ ဖယ်ခွါ၍ အထီးတည်း ကျင့်ကြံနေပြီ ဆိုသည်ကိုပါ ပို၍ပေါ်လွင်လာပါတော့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ဦးဆောင်သည့် မြန်မာစစ်အစိုးရ ကိုယ်၌က ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ခေတ်တွင် ဆက်သွယ်ရေး ဧရိယာပြင်ပသို့ ရောက်နေသည်ကို တွေ့ကြရပါတော့သည်။
ဤနေရာတွင် သောမတ်စ် ပီဘာနေး (Thomas P. M. Barnett) ဆိုသူပညာရှင်တဦး၏ တင်ပြချက်က စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းလှပါသည်။ သူက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရေတပ်မတော် စစ်ရေးကောလိပ်မှ ပါမောက္ခတဦးဖြစ်ပြီး သူရေးသားခဲ့သည့် "ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်၏ နောက်ဆုံး ကမ္ဘာ့မြေပုံ၊ ၂၁ ရာစုတွင် စစ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်း" (Pentagon's New Map: War and Peace in the Twenty-First Century) စာအုပ်က လူသိများလှပါသည်။ သူက အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခဲ့ရသည့် စစ်ပွဲများနှင့် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း သဘောတရားကို ဆက်စပ်တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သူကပြောရာတွင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးချိန်မှစ၍ အမေရိကန်က အခြားအင်အားတူ၊ အင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့် စစ်ဆိုင်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် နှစ်များအတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံက ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခဲ့ရ သည့် စစ်ပွဲများကို ပြန်ကြည့်သောအခါ အခြားကမ္ဘာနှင့် မဆက်စပ်နေသည့်၊ တနည်း ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့် ဝေးကွာဖယ်ခွါနေသည့် နိုင်ငံ များတွင်သာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်ကို သူတွေ့ရှိရသည်။
သူက ကမ္ဘာ့မြေပုံတွင် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့် ထဲထဲဝင်ဝင် ပေါင်းစပ်နေသည့် နိုင်ငံများကို ဖော်ပြသည်။ ဤနိုင်ငံများက စီးပွားရေးစနစ်အရ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအရ၊ ဒီမိုကရေစီအရ ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်ရှင်သန်နေသော နိုင်ငံများဖြစ်သည်။ သူ၏အခေါ်အရ ဤနိုင်ငံများကို ဗဟိုချက်မနိုင်ငံ (core)၊ တနည်း ရှင်သန်လည်ပတ်နေသည့် ချက်မ (functioning core) ဟု သုံးသည်။ ကျန်သည့်နိုင်ငံများကတော့ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့် မဆက်စပ်နိုင်ကြသော နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို မချိတ်ဆက်မိသည့် ချောက်ကမ်းပါး (non-integrating gap) သို့ ကွာဟနေသည့် ကွက်လပ် (gap) ဟု ခေါ်သည်။ ဤနိုင်ငံများတွင် ကာရစ်ဘီယန်ပင်လယ်အော်ရှိ နိုင်ငံများ၊ အာဖရိကတိုက်ရှိ နိုင်ငံအားလုံးနီးပါး၊ ဘောလ်ကန်ဒေသ၊ ကော့ကေးဆပ် ဒေသ၊ အလယ်ပိုင်းအာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့တောင်အာရှ၊ အနောက်တောင်အာရှဒေသရှိ နိုင်ငံများ ပါဝင်နေကြသည်ဟု ဆိုသည်။ သူ၏ သဘောတရားအရ "(ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားမှုမရှိသော (နိုင်ငံများ) သည် အန္တရာယ်ရှိနေသည်" (Disconnectedness defines danger.) ဟု ဆိုသည်။
ဘာနေး၏ အဆိုအရ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်ဝေးသည့် နိုင်ငံများသည် ဆင်းရဲကြသည်။ ဒီမိုကရေစီ မရှိကြ။ ကမ္ဘာ့၏ယဉ်ကျေးသော လူ့တန်ဖိုးများကို လက်မခံကြ။ ပြဿနာ၊ ပဋိပက္ခများလည်း ပြည့်နေကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် ကြောင်လိမ်လှေခါးသဖွယ် ပြဿနာများဖြင့် တ၀ဲလည် လည် ဆင်းနေရင်း၊ နောက်ဆုံး အကျပ်အတည်းများက ကပ်ဆိုက်လာရသည်။ နိုင်ငံတကာမိသားစုက ၀င်မရှင်းလျှင် မရနိုင်တော့သည့် အနေ အထားမျိုး ဖြစ်လာခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဤအယူအဆအပေါ် အမေရိကန်ရေတပ်တွင်လည်း စက်တင်ဘာ ၁၁၊ နောက်ပိုင်းကာလတွင် အလေးအ နက် ဆွေးနွေးမှုများရှိလာခဲ့ သည်ဟုလည်း ဖတ်ရဖူးသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကလည်း အလားတူအခြေအနေမျိုး ဆိုက်လာခဲ့ပြီဟု ယူဆရသည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရက အထီးကျန်ဝါဒကို ကျင့်သုံးနေရင်း ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏ ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာ ပြင်ပတွင် နေထိုင်လာခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ ယခု နာဂစ်မုန်တိုင်းကာလ လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ ကပ်ဘေးကြီး ဆိုက်ရသည့်တိုင် အထီးကျန်ဝါဒကို ဆက်လက်ကိုင်စွဲဆဲ ဖြစ်နေသည်။ ဤသို့ ဆက်လက်နေထိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ မရှုမကယ်နိုင်နှင့် နိုင်ငံတကာက ၀င်ရောက်ကယ်ဆယ်ရတော့မည့် အခြေအနေသို့ ဆိုက်လာခဲ့ပြီ။ သို့သော် စစ်အစိုးရက ခေါင်းမာမာဖြင့် ငြင်းပယ် နေဆဲ။
သေချာသည့်အချက် တခုတော့ရှိပါသည်။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏ ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာ ပြင်ပတွင်နေထိုင်၍ စစ်အစိုးရ ပြောပြောနေသည့် "ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် နိုင်ငံတော်ကြီး" ကို တည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ဂဲရက် အီဗင် (Gareth Evans)
အကယ်၍ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များက ဆက်လက်၍ အမြင်ကျဉ်းခေါင်းမာနေပါက၊ လူသားဆန်မှု ဟူသော ခေါင်းစဉ်အောက်မှတဆင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး များ၏ ဆန္ဒကို မျက်ကွယ်ပြုကာ နိုင်ငံတကာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု တရပ်ပြုရတော့မည်လောဟု မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိလာပါသည်။ အထောက် အပံ့များ အသည်းအသန် လိုအပ်နေသော ပြည်သူများ အထူးသဖြင့် သွားလာရန်ခက်ခဲသော ကမ်းရိုးတန်းဒေသများအတွင်းရှိ ပြည်သူများထံသို့ အကူအညီများ ပေးရန်အတွက် စစ်လေယာဉ်များဖြင့် အကူအညီများချပေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် သဘောင်္များဖြင့် အထောက်အပံ့ ရိက္ခာများချပေးခြင်း စသည်တို့ကို လုပ် ဆောင်ပေးရန် သင့်-မသင့်ဟူသော မေးခွန်းကို ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။
လွန်ခဲ့သော ကြာသပတေးနေ့တွင် အခြားသူများ တင်ပြပြောဆိုနေသကဲ့သို့ပင်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘားနဒ်ကူချနာ (Bernand Kouch ner) က ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် အစိုးရနှင့်နိုင်ငံတော် ခေါင်းဆောင် ၁၅၀ က ချွင်းချက်မရှိ သဘောတူညီ လက်ခံထားခဲ့သော " အကာအကွယ်ပေးရန် တာဝန်ရှိမှု " (Responsibility to Protect) ဟူသော မူအရ အတင်းအကျပ် အင်အားသုံး၍ ကြားဝင် ဆောင်ရွက်ရန် သင့်လျော်သော အခြေအနေတခုဖြစ်နေပြီဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ သူက လုံခြုံရေးကောင်စီမှနေ၍ မြန်ာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ် ချက်တခု ချမှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပြီး၊ ဤသို့ ကူညီပေးရေးပစ္စည်းများ "ပို့ဆောင်ခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းရန်နှင့် မြန်မာအစိုးရက လိုက်နာစေရန် တောင်းဆိုရန်" တင်ပြခဲ့သည်။သူ၏ အဆိုတင်သွင်းချက်ကို ပြည်တွင်းရေးရာ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် အကဲခတ်ကြသော တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရုရှနိုင်ငံများမှ ချက်ချင်းပယ်ချခဲ့သည် သာမက၊ အခြားကမ္ဘာ့ဒေသရှိ နိုင်ငံများအများအပြားကလည်း ပယ်ချခဲ့ကြသည်။
ဤသို့ဆောင်ရွက်ရန် ကုလသမဂ္ဂ ထိပ်တန်းအရာရှိများအပါအ၀င် ဗြိတိန်နှင့် အခြားနိုင်ငံများကလည်း စိုးရိမ်ပူပန်မှု ရှိနေကြသည်။ ဤသို့ "မီးတောက်လောင်စေနိုင်သော" နည်းလမ်းသည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများထံမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရရှိနိုင်ရေး အတွက် အခြားဖြစ်နိုင်သေးသော ကြိုးပမ်းမှုများ အားလုံးကို လုံးဝတလွဲ ဆိုးကျိုးဖြစ်သွားနိုင်သည်ဟု စိုးရိမ်နေကြသည်။ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထိရောက်သော အကူအညီ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း စနစ်များ မရှိဘဲ အထောက်အပံ့များကို လေယာဉ်ပေါ်မှ ပစ်ချပေးရန် အားထုတ်မှုသည် လက်တွေ့အရ လုံးဝထိရောက်မှု မရှိဘဲ ဆေးဝါးအထောက်အပံ့များအား အလွဲသုံးစား ပြုနိုင်သော အခြေအနေနှင့်အတူ၊ အန္တရာယ်ပင် ရှိနေသေးသည်ဟု ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းအပေါ် နားလည် ကျွမ်းကျင်သော လူသားချင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များပေးရေး အေဂျင်စီများထံမှ တုံ့ပြန်စောဒကသံများ ထွက်ပေါ်လာစေခဲ့သည်။
ထိုတုံ့ပြန်ချက်များက ခိုင်လုံသော တုံ့ပြန်ပြောဆိုချက်များ ဖြစ်ကြပြီး၊ မူဝါဒအပေါ်တွင် အကြီးအကျယ် ချိန်ဆနေကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် တရက်၊ တရက်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ အကူအညီပေးမှုအား လုံးဝနီးပါး ကြန့်ကြာနေရခြင်း၊ အစိုးရ၏ အကူအညီများသာ အနည်းအကျဉ်းမျှ ၀င်ရောက်ခွင့် ပြုနေခြင်းနှင့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း မယုံနိုင်ဖွယ် အသေအပျောက်နှုန်း တိုးတက်လာနိုင်သည်ဟူသော စိုးရိမ်ချက်များနှင့်အတူ ထိုတုံ့ပြန်ငြင်းခုံချက်များသည် လက်ခံဖွယ်ရာ တစစ ဆွဲဆောင်မှု နည်းလာပြီး၊ နောက်ဆုံးတွင် ပြန်စဉ်းစားရန် လိုအပ်လာပါသည်။
"အကာအကွယ်ပေးရန် တာဝန်ရှိမှု" ဟုဆိုသော ကူချနာ၏ ကိုးကားချက်အပေါ် ကျနော်၏ပထမဦးဆုံးသော စိုးရိမ်ချက်မှာ (ယခု အချိန်ထိလည်း အလေးအနက် စိုးရိမ်ချက်တခုအဖြစ် ရှိနေသေးသည်) နိုင်ငံရေးအရ စုပေါင်းတောင်းဆိုချက်တခုအဖြစ် အပြည့်အ၀ နားလည်နိုင်သလို၊ ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးတွင် ကမ္ဘာကြီးက သူတို့အား လိုအပ်နေသည်ကို ဘုရားသခင်ကသာ သိနိုင်သော အခြေအနေမျိုး ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုသို့သော တောင်းဆိုချက်ကြောင့် သူနှင့် အခြား သူများ၏ သံန္နိဌာန်ချမှတ် ဆောင်ရွက်နေသော ကြီးမြတ်သည့်အရေးတခု ဖြစ်သည့်၊ လူများအစုအပြုံလိုက် ဖိနှိပ်ညှဉ်းပမ်း ခံနေရခြင်းကို နိဂုံချုပ်အဆုံးသတ်ရန် ကိစ္စအပေါ်တွင်လည်း နိုင်ငံတကာ အထောက်အပံ့များ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားနိုင်သော အလားအလာလည်း ရှိနေသည်။
ကမ္ဘာ့ထိပ်သီး အစည်းအဝေးတွင် ဤအယူအဆကို စတင်သန္ဓေတည်ကာ၊ နောက်ဆုံး ကမ္ဘာ့ထိပ်သီး အစည်းအဝေးက လက်ခံလာအောင် ပြုနိုင် ခဲ့ကြသည့် မူလပိသုကာများအနက် တဦးဖြစ်သော၊ ဤအယူအဆကို ဖွားမြင်ပေးကြသည့် နိုင်ငံတကာကော်မရှင်တွင် ပူးတွဲသဘာပတိအဖြစ် လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ကျနော်အနေဖြင့် အသေအချာ သိထားသည့် "အကာအကွယ်ပေးရန် တာဝန်ရှိမှု" ဆိုသည်မှာ ယေဘုယျ လူသားလုံခြုံရေးအတွက် သက်သက်မျှသာ မဟုတ်၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ထိခိုက်ခံရသော ပြည်သူများအား အကာကွယ်ပေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ/အေအိုင်ဒီအက်စ် (HIV/ AIDS) သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့သော အန္တရာယ်မျိုး ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသော ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပေးရန်အတွက်လည်း အကျုံးမ၀င်ပေ။
အမှန်တွင် " အကာအကွယ်ပေးရန် တာဝန်ရှိမှု" ဆိုသည်မှာ အတိတ်ကာလအချိန်များတွင် ကျနော်တို့ ၀မ်းနည်းဖွယ် အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သော " လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု၊ စစ်ရာဇ၀တ်မှု၊ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ အမြစ်ပြုတ် သတ်ဖြတ်မှုနှင့် လူသားမျိုးနွယ်တခုလုံးအား ဆန့်ကျင်ကျူးလွန်မှုများ" အန္တရာယ်မှ အကာအကွယ်မဲ့ ပြည်သူများအား အကာအကွယ်ပေးခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် တဆက်တည်း ဖြစ်ခဲ့သော လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်၏ ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်ပင် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေအောက်တွင်မူ အစိုးရတရပ်၏ဆန္ဒအား ဆန့်ကျင်၍ တိုင်းပြည်တခုအတွင်း အင်အားသုံး ကြားဝင် ဆောင်ရွက် ရန် သင့်-မသင့် မေးခွန်းထုတ် သင့်ပေသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေမျိုးတွင်ပင်လျှင် ကာကွယ်ဟန့်တားခြင်း မလုပ်ဆောင်နိုင်သော အခါမှသာ နောက်ဆုံးနည်းလမ်းတခုအဖြစ် လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ သဘောတူညီချက်ကိုယူ၍ စစ်အင်အား အသုံးပြုခွင့်ကို အကာအကွယ်ပေးရန် တာဝန်ရှိမှု သဘောတရားက ခွင့်ပြုသည်။ ဤသို့ ပြင်းထန်သည့် တုံ့ပြန်အရေးယူမှုအစား၊ လျော့နည်းသက်သာသည့်နည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါက အန္တရာယ်ကို တားဆီးရန် ရှောင်လွှဲရန် မဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေ၊ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် အဆုံးအရှုံးများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်နိုင်သော ရလဒ်ဖြစ်ပေါ် နိုင်သည့် အချိန်မှသာ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ " အကာအကွယ်ပေးရန်တာဝန်ရှိမှု" (R2P) သည် အထူးသဖြင့် စစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုဖြင့် လုံးဝအဆုံးသတ်ရမည် ဟူသော အယူအဆ သည် အစုအပြုံလိုက် သတ်ဖြတ် ကျူးလွန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေမဟုတ်ဘဲ၊ အခြားအခြေအနေများတွင်လည်း ကိုင်စွဲအသုံးချလာ နိုင်သည်ကို တွေးတောမိခဲ့ကြပါသည်။ ဤသို့ အသုံးပြုလာပါက ကမ္ဘာ့တောင်ဖက်ခြမ်းရှိ နိုင်ငံများတွင် လူတန့်ဘိုးသစ်ကို နှစ်သက်လက်ခံနေမှု များ အငွေ့ပျံ ပျောက်ပြယ်သလို အလွယ်အတူ ကွယ်ပျောက်သွားနိုင်သည်ဟု အဖွဲ့ဝင်အားလုံးက သဘောတူ လက်ခံခဲ့ကြပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုမျာအား အမြစ်ပြုတ် ချေမှုန်းခြင်းစသော ကိစ္စရပ်မျိုး နောက်တဖန်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါက ၁၉၉၀ ခုနှစ်များအတွင်း ရ၀မ်ဒါ (Rwanda) နှင့် ဆရီဘရီနီးကား (Srebrenica) နိုင်ငံကိစ္စများအတွင်းက ကျနုပ်တို့ စိတ်ပျက်ဖွယ် ငြင်းခုန်ခဲ့ ကြ ရသလို အချုပ်အချာအာဏာကို ရှေ့တန်းပဓာဏထားမည်လော၊ ဤသို့ စက်ဆုပ်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအမှုများကို မည်သို့မျှ မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘဲ ကြည့်နေကြရဦးမည်လောဟူသည့် ဇာတ်ထုပ်အဟောင်းကို ထပ်မံ မဆွေးနွေး မငြင်းခုံလိုကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်လည်း ပြဿနာက ဤသို့ ဖြစ်နေသည်။ အကယ်၍ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက ယခုလုပ်နေသည့်ပုံစံအတိုင်း တကယ့်လက်တွေ့တွင် ထောင် သောင်းချီသော ပြည်သူများ အန္တရာယ်ရှိနေသည့်တိုင် အကူအညီအထောက်အပံ့များအား လုံးဝထိရောက်စွာ ဆက်လက် ငြင်းဆန်နေမည်ဆိုပါ က၊ ထိုလုပ်ရပ်သည် လူသားမျိုးနွယ်တခုလုံးအား ကျူးလွန်သောပြစ်မှုတခု ဖြစ်သွားကာ အကာအကွယ်ပေးရန် တာဝန်ရှိမှု ဥပဒေသည် လုံးဝအံ ကိုက် ဖြစ်နေသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံက ကမကထပြုခဲ့ သည့် (R2P) သဘောတရား သန္ဓေတည်စေခဲ့သော ကော်မရှင်၏အစီရင်ခံစာသည် အလားတူ အနေအထားမျိုးကို မျှော် မှန်းရေးသားခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသို့ အသုံးချနိုင်ရန် ဖော်ပြခဲ့သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေ အကြောင်းတခုတွင် " ကြီးမားသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကပ်ဘေးများ ကျရောက်လာပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံက ထိုပြဿနာအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိုသော ဆန္ဒမရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အရည်အချင်း မရှိခြင်း သို့မဟုတ် အကူအညီတောင်းခံလာခြင်း၊ သို့မဟုတ် လူ့အသက်ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးနေရခြင်း သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးရန် အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်ခံနေရခြင်း ရှိနေပါက ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် စစ်အင်အားဖြင့် အသုံးပြု၍ရနိုင်မည်" ဟု မျှော်မှန်းထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဘာသာစကားအရ အတိအကျ အသုံးပြုထားခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် လူသားမျိုးနွယ်တခုလုံးအား ကျုးလွန်သောပြစ်မှု ဟူ၍သာ ရည်ညွန်းထားသည်။ နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံး ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သော ရောမ သဘောတူညီချက်(Rome Statute) နှင့် နိုင်ငံတကာ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ဥပဒေများတွင် ထိုကဲ့သို့သော ပြစ်မှုများအား "ဘေးဒုက္ခအကြီးအကျယ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ် သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်း သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေသော လူသတ်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်း၊ နိုင်လိုမင်းထက် ပြုကျင့်ခြင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့သော အလားသဏ္ဍန်တူသော အခြားသော လူသားမဆန်လုပ်ရပ်များအား ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်၊ စနစ်တကျ ချိုးဖောက် ကျူးလွန်ခြင်း" ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထားသည်။
သို့အတွက်ကြောင့် အမြဲတစေဆိုသလို ရှေ့နေများက ဤပြဌာန်းချက်ပေါ်ပေါက်လာရသည့် စိတ်ကူးစဉ်းစားချက်သာမက ဤကိစ္စများအားလုံးတွင် စောဒကတက်လေ့ ရှိကြပါသည်။ ထို့အပြင် လုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းတွင်လည်း လေယာဉ်ပေါ်မှ အထောက်အပံ့များ ပစ်ချပေးခြင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့အလားတူသော ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးသည် လျော်ကန်ပါ၏လော၊ တရားဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင်ပါ၏လော၊ ကျင့်ဝတ်ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ညီပါ၏ လော၊ လက်တွေ့ကျပါ၏လော... စသဖြင့် အငြင်းပွားစရာများစွာ ရှိနေပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ယခုအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏လုပ် ဟန်ဖြင့် အလားသဏ္ဍန်တူနေသာ အစိုးရတရပ်၏ ပျက်ကွက်မှုသည် အလွန်ဆိုးဝါးစွာ ဖြစ်ပေါ်နေပါက လူသား မျိုးနွယ်တခုလုံးအား ချိုးဖောက် သော ပြစ်မှုတခု အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်နေသော ၎င်းတို့၏ အမြင်ကျဉ်း ခေါင်းမာမှုသည် မြင်ရုံမျှပင် ဥပဒေကြောင်းအရ လုံးလောက်နေသော အထောက် အထားတခု ဖြစ်နေပါသည်။ ထိုသို့သော ဆောင်ရွက်မှုအတွက် "အကာအကွယ်ပေးရန်တာဝန်ရှိမှုဥပဒေ" အား ကျင့်သုံးရန် ဖြစ်လာနေပါသည်။ သို့အတွက်ကြောင့် လုံခြုံရေးကောင်စီဖက်မှရော၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကရော နှစ်ဖက်စလုံးက ၎င်းအယူအဆကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် စဉ်းစားကြရန် လိုအပ်လာနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
လေဘေးဒုက္ခသည်များဆီကို စားသောက်စရာများ သယ်ဆောင်လာသည့် လူတစုကို တွေ့လိုက်သည်နှင့် ကလေးငယ်လေးများ မှာ ကစဉ့်ကလျားနှင့် အပြေးအလွှား ရောက်လာသည်။ ပေးကမ်းသူများသည် ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဖြစ်သည်ကိုပင် မကြည့်နိုင်ဘဲ အစားအသောက် များကိုသာ အလုအယက် တောင်းရမ်းကြသည်။
စားသောက်ဖွယ်ရာများ ယူဆောင်လာသည့် နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ မင်းသမီးများကို ဒုက္ခသည် ကလေးသူငယ်များက အံ့သြကြည်နှုးမှု ရှိဟန်မတူဘဲ ခေါက်ဆွဲထုပ်များ၊ မုန့်များ၊ ဆန်များကိုသာ အငမ်းမရမြင်တွေ့ပြီး စားသောက်စရာပစ္စည်းများကိုသာ အငမ်းမရ၊ တောင်းရမ်း၊ ဆွဲယူ နေကြရလို့ သွားရောက်လှူဒါန်းကြသည့် မင်းသားများ မျက်ရည်စက်လက် ဝမ်းနည်းရပါတယ်လို့ လေဘေးဒုက္ခသည်များကို ကူညီနေသည့် အနုပညာရှင်တဦးက ပြောသည်။
နာဂစ်လေမုန်တိုင်းကြောင့် ကလေးများ မည်ရွေ့မည်မျှ သေဆုံးပြီး အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်သွားရသည်ကို အတိအကျ မသိရှိနိုင်သော်လည်း၊ ကလေးငယ် အများစုသည် ကျောင်းနေရမည့်အရွယ်များ ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဝမ်းရေးအတွက် ကူညီပေးကမ်းမည့်သူများကိုသာ မျှော်လင့်နေရသည့် အနေအထားကိုပင် ကျော်လွှားနိုင်ခြင်း မရှိကြသေးပေ။ ကျောင်းနေရေးအတွက် ဆိုလျှင်မူ အခက်အခဲများစွာ ရှိပေလိမ့်မည်။
"သူတို့ကိုယ် သူတို့တောင် ကျောင်းတက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အသိတောင် မရှိနိုင်တော့ဘူး။ ကျနော်တို့ ဘယ်သူတွေဆိုတာတောင် မကြည့်ကြတော့ဘူး။ ယူလာတဲ့ ဆန်တွေ၊ စားစရာတွေကိုယူဖို့ပဲ သိကြတော့တာ" ဟု ကူညီပေးနေသူ အနုပညာရှင်တဦးက ပြောသည်။
လာမည့် ဇွန်လဆန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း ကျောင်းအများအပြားသည် ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေကျ ဖြစ်သော်လည်း မုန်တိုင်းဘေး အန္တရာယ် ဆိုးရွားစွာ ကျရောက်ခဲ့သည့် ဧရာဝတီတိုင်းတွင်မူ စားသောက်နေထိုင်ရေးအတွက် ကူညီမည့်သူကို မျှော်လင့်နေရဆဲ ဖြစ်သဖြင့် ကျောင်းတက်ရန် အခြေအနေ မရှိသေးပေ။
ကျောင်းဖွင့်ရက် နီးကပ်လာသော်လည်း လေဘေးဒဏ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်း စားရေး၊ နေရေးအတွက် ရုန်းကန်နေရသည်။
အများစုမှာ နေစရာအိမ်မရှိသဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် နေထိုင်ကြရသလို၊ အစားအသောက်ကလည်း လာလှူမှ စားရမည့်အခြေအနေ ရှိနေ သည်။
"ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးကတော့ စာမတတ်တော့တဲ့ ကလေးတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ၊ အထက်တန်း ပညာ တို့ သင်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေ ရှိလာနိုင်တော့ တကယ့်ကို စိုးရိမ်စရာပါပဲ" ဟု ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွင် နေထိုင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံကလေးငယ်များ ပညာရေး တိုးတက်မြင့်မားနိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးသူ ဒေါက်တာသိန်းလွင်က ပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ ကျောင်းပေါင်း ၃၇၅ဝ အနက် ၃ဝဝဝ ခန့် ပျက်စီးခဲ့သဖြင့် လေဘေးဒုက္ခသည်ကလေးများ ပြန်လည်၍ ကျောင်းတက်နိုင် ရန် အခက်အခဲရှိသေးကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးသူငယ်များ အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ရုံးမှ ပြောခွင့်ရ အမျိုးသမီး ရှန်သာ ဘိုးမင်း က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
လပွတ္တာမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျောင်း ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ပျက်စီးနေသွားခြင်းကြောင့် ကျောင်းတက်နိုင်သည့် သူများရှိသော်လည်း စာသင်ကြား နိုင်ရန်အတွက် ကျောင်းများသည် အဆင့်သင်မရှိသေးကြောင်း လပွတ္တာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ အေးကြူ ပြောသည်။
သူက "ဘာမှလည်း မပြင်ရသေးဘူး၊ ကျောင်းတက်ဖို့ နေနေသာသာ လူတွေက စားဖို့သောက်ဖို့တောင် အနိုင်နိုင်၊ အမိုးအကာမရှိတဲ့ နေရာတွေ မှာ နေနေရတော့ ဘာမှ မစဉ်းစားနိုင်သေးပါဘူး" ဟု ပြောသည်။
သဘာဝလေဘေးဒဏ်ခံခဲ့ရသည့် ဒေသများမှအပ ရန်ကုန်မြို့၊ မန္တလေးမြို့နှင့် အခြားမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျောင်းများသည် မေလနောက်ဆုံးပတ် အတွင်း ကျောင်းအပ်လက်ခံကာ ဇွန်လဆန်းတွင် စတင်၍ ကျောင်းဖွင့်တော့မှာဖြစ်သော်လည်း လေဘေးဒဏ်ခံရသည့် ဒေသများတွင်တော့ ဖြစ်လာနိုင်စရာ လမ်းမမြင်သေးပါ။
အစိုးရနှင့်အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများမှလည်း ကျောင်းများ ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် နအဖစစ်အစိုးရထံမှ ပြန်လည်ပြုပြင်ခွင့်ကို စောင့်ဆိုင်း လျက်ရှိပြီး ယာယီတဲများပြုလုပ်ကာ စာသင်ခန်းများအဖြစ် အသုံးပြုရေး စီစဉ်လိုကြောင်း ရှန်သာ ဘိုးမင်း (UNICEF) က ပြောဆိုလိုက်သည်။
တောင်ဒဂုံမှ ဒေသခံတဦးကလည်း "ဇွန် ၁ ရက်နေ့မှာ ကျောင်းဖွင့်မယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှကလေးတွေလည်း တက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဗျာ။ ကလေး တွေ ကျောင်းတက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ မပြောနဲ့ စားဖို့၊ သောက်ဖို့တွေနဲ့ မနည်း လုံးပန်းနေရတာ။ ကျောင်းထားဖို့ ဘယ်လိုမှကို မစဉ်းစားနိုင်သေး တာပါ" ဟု ပြောသည်။
မြေလုယက်မှုများ နောက်ဆက်တွဲ လိုက်ပါမည့်အရေး
အင်္ဂါနေ့၊ မေလ 20 2008 17:49 - မြန်မာစံတော်ချိန်
မုန်တိုင်းနာဂစ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ စပါးကျီဟု ဆိုလောက်သည့် ရန်ကုန်၊ ပဲခူးနှင့် ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများကို အကြီးအကျယ် ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ပညာရှင်များနှင့် မြန်မာ့ပြည်အရေး လေ့လာနေကြသူများက ဤမုန်တိုင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆန်စပါးရှားပါး ပြတ်လပ်မည့် ပြဿနာကို တွေး၍ ပူနေကြပြီ။ ထို့အပြင် ကမ္ဘာနှင့်အ၀ှမ်း ဆန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်နေမှုများကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှနှင့် တောင်အာရှဒေသအတွင်းပါ ရိုက်ခတ်မှု ရှိလာလိမ့် ဦးမည်ဟုလည်း တွက်ဆနေကြပြီ။ မြန်မာအစိုးရ၏ တရားဝင် ကိန်းဂဏန်းများအရ လက်ရှိဆန်စပါး ပျက်စီးမှုမှာ စုစုပေါင်း ထုတ်လုပ်မှု၏ ၂.၃% သာ ရှိသည်ဟု ဆိုသော်လည်း၊ မိုးလရာသီဖြစ်၍ နောက် စပါးစိုက်ကာလကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်မှု ရှိစေနိုင်မည်ဟု ဆိုကြသည်။
မြန်မာအစိုးရက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စာရင်းများအရ မြို့နယ်ပေါင်း ၂၃ မြို့နယ်ရှိ စပါးစိုက်ဧက ၂.၄၃ သန်း ထိခိုက် ပျက်စီးခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုမျှမက စပါးစိုက်သူ လယ်သမား မိသားစုပေါင်း ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ၁၃၀, ၀၀၀ နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ၁၁၇, ၀၀၀ ထိခိုက် နစ်နာခဲ့ရသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထိုမျှမက ကျွဲနွား၊ ထယ်၊ ထွန်၊ လှည်း၊ လယ်ထွန်စက်နှင့် ရေစုတ်စက် များလည်း အရေအတွက်များစွာ ပျက်စီးခဲ့ရပါသည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရက လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် မျိုးစပါး၊ ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် အခြား ကုန်ကျစားရိတ်များ၊ စိုက်ပျိုးစားရိတ် ချေးငွေများ အတွက် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ လိုအပ်မည်ဟု နိုင်ငံတကာသို့ တင်ပြတောင်းခံထားပါသည်။
တိုင်း မြို့နယ် ဧကသန်းပေါင်း
ဧရာဝတီတိုင်း ၇ ၁.၅၉
ရန်ကုန်တိုင်း ၁၅ ၀.၄၈
ပဲခူးတိုင်း ၁ -
စုစုပေါင်း ၂၃ ၂.၄၃
လာမည့် စပါးစိုက်ကာလတွင် အလျှင်အမြန် ပြန်လည် စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးအတွက် အစီအစဉ်များကိုလည်း ဖော်ပြထားခဲ့ပါ သည်။ သို့သော်လည်း ဤအစီအစဉ်များတွင် လယ်ယာ မြေ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် ပြဿနာများကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားထားကြသည်ကို မတွေ့ရပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဆူနာမီ ဖြစ်စဉ်ကာလက အတွေ့အကြုံများနှင့် ယှဉ်၍ အလွန်စိုးရိမ် ဖွယ် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ဆူနာမီ ရေလှိုင်းဒဏ်ကို အကြီးအကျယ် ခံစားခဲ့ကြရပါသည်။ လူပေါင်း ၆, ၀၀၀ ခန့် သေကြေခဲ့ရပြီး၊ အိုးအိမ်လုပ်ငန်း အများအပြား ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြရပါသည်။ ဆူနာမီလှိုင်း ရိုက်ခတ်ခံရစဉ်က ရွာပေါင်း ၄၇ ရွာ ပျက်စီးသွားခဲ့ရပြီး၊ ယခုတိုင် ရွာပေါင်း ၃၂ ရွာတွင် မြေပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာများ အကြီးအကျယ် ကြုံတွေ့နေကြရဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ဤရွာအများစုမှာ ဖန်ငခရိုင်တွင် ရှိနေကြပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အဒမန် ကမ်းခြေတလျှောက်တွင် မြေအများစုမှာ နိုင်ငံခြား ခရီးသွားလုပ်ငန်း စီးပွားဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် မျက်စေ့ကျနေကြသော နေရာများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုမြေကို ၀ယ်ယူလိုကြသူ ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး သမားများ၊ အစိုးရထဲရှိ နိုင်ငံရေးသမားကြီးများလည်း အကြောင်းအပေါင်းသင့် နေသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ဆူနာမီတွင် ရွာအများစု ပျက်ခဲ့ကြရပြီး၊ မူကလတည်းက မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို စနစ်တကျ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိကြသော ရွာသားများအဖို့ မြေလုယက်ခံလိုက်ရခြင်းနှင့် မိမိနေထိုင်ရာများမှ ဖယ်ပေးလိုက်ရခြင်းများ ကြုံခဲ့ကြရသည်။ ဤရွာအများစုကလည်း ပျံကျရွာများ ဖြစ်ကြသည်။ ဆလုံတိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ကြသည့် တံငါရွာများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ မြေယာဥပဒေအရ ပျံကျကျူးကျော် နေရာများတွင် နေထိုင်ကြသူများသည် နေထိုင်ချိန် ဆက်တိုက် ၁၀ နှစ်ပြည့်လျှင် မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် တောင်းခံခွင့်ရှိသည်ဟု ဆိုသော်လည်း လက်တွေ့တွင်ကျေးရွာလူထု များက စာရွက်စာတမ်းကိစ္စများကို အလေးမထားခဲ့ကြပါ။ ယခင်ကတည်းက ကုမ္ပဏီကြီးများက ဟိုတယ်များ၊ တည်းခိုခန်းများဆောက်ရန် ရွာသားများကို နှင်ထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြဖူးသေးသည်။ ယခုတော့ ဆူနာမီက သူတို့အကြိုက် လုပ်ပေးခဲ့ကြသည်။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု ပဋိပက္ခ ဖြစ်လာကြသည့် အချိန်တွင် ကုမ္ပဏီကြီးများတွင် ထူးထူး ဆန်းဆန်း မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် လက်မှတ်များကလည်း အရံသင့် ရှိနေခဲ့ကြသေးသည်။
သို့သော် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အခြေအနေက မြန်မာနိုင်ငံနှင့်စာလျှင် တော်သေးသည်ဟု ဆိုရပါလိမ့်မည်။ ဟတ်လမ်းဖုန်းကျေးရွာရှိ မြေအမှုတွင် ရွာသားများက တကွာပါမြို့နယ် ရုံးသို့ လာ၍ ဆန္ဒပြနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုကျေးရွာတွင် နိုင်ငံရေးသမားတဦး အစုရှယ်ယာဝင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီက သူပိုင်သည်ဟု ဆိုင်းပုတ် ထောင်၍ ခြံခတ်ထားခဲ့ကြပြီ။ သို့သော်လည်း သူတို့က အမှုကို တရားရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သလို၊ အဲန်ဂျီအိုများကလည်း သူတို့ဖက်က ကူကြသည်။ ဤခြံခတ် ထားသည့် မြေကွက်အတွင်း သူတို့အတွက် အိမ်များကို အလျှင်အမြန် ကူဆောက်ပေးကြသည်။ ဥပဒေကြောင်းအရ ပညာရှင်များက တိုက်ပွဲဝင်ပေး ခဲ့ကြသလို၊ ဆူနာမီဒုက္ခသည်များအတွက် ဥပဒေအကြံပေးများ၊ ဥပဒေကျောင်းသားများက အိမ်တိုင်ယာရောက် အကြံပေးကြ၊ တိုင်စာ၊ လျှောက်လွှာစာ ရေးပေးကြသည်။ သတင်းမီဒီယာများကလည်း ဖော်ပြပေးကြသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အခြားနိုင်ငံရေးသမားများကလည်း ကန့်ကွက်ပြောဆို ပေးခဲ့ကြသလို၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၊ ဆီးနိတ် လူသားလုံခြုံမှု ဆိုင်ရာ ကော်မတီ၊ စောင့်ကြည့် နေကြသည့် နိုင်ငံတကာအစိုးရများ၊ အကူအညီ ပေးသူများ ကလည်း ရှိနေကြသေးသည်။ အချို့အမှုများမှာ မပြီးပြတ်သေးသော်လည်း အချို့သူများက သူတို့မြေကို ပြန်၍ အရယူနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကုပ္မဏီက မြေသိမ်း ပိုက်မှုကို အပြီးအပြတ် မတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့သော်လည်း သူတို့အတွက် မြေတကွက်စာကို အရပြန်ယူနိုင်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်လာနိုင်သည့် အခြေအနေကို မိမိကြိုတင် မှန်းဆကြည့်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု ဥပဒေအရ မြေယာများကို နိုင်ငံတော်ကသာ ပိုင်ဆိုင်သည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးသူများက ထိုမြေပေါ်တွင် လယ်လုပ်ကိုင် ထုတ်လုပ်နေသ၍ ထုတ်လုပ်အသုံးချ စိုက်ပျိုးခွင့်သာ ရှိပါသည်။ ယခု မုန်တိုင်းပြီး ဖျက်ဆီးခံ လိုက်ရသည့် အခြေအနေတွင် အချို့ လူ ၄, ၀၀၀ ကျော် နေထိုင်သော ကျေးရွာများတွင်ပင် လူရာဂဏန်းမျှသာ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်တော့သည်ဟူသော သတင်းများ ကြားနေရပါသည်။ အချို့ ရွာလုံးကျွတ် ပျက်စီးသေဆုံးမှုများလည်း ကြားနေရပါသည်။ ဤအနေအထားတွင် နောက်ပိုင်း၌ ရွာများမှာ စုစည်းကျေးရွာများသဖွယ် ဖြစ်သွား နိုင်ပါသည်။ သေဆုံးရသူများပိုင်သည့် မြေကို မည်သူက ဆက်ခံကြမည်နည်း။ ကျေးလက်လူထုများက မြေပိုင်ကြောင်း အထောက်အထား ပြနိုင်ရန်ဆိုသည်မှာလည်း ပို၍ဝေးပါသည်။ မုန်တိုင်းဖျက်ဆီး ခံရသည့်အောက်တွင် အသက်ရှင်ရပ်တည်ရန်ပင် ယခု အပြင်းအထန် ရုန်းကန်နေကြရပါသည်။ ထို့အပြင် လယ်ယာပြန်လည်စိုက်ပျိုးရန် ဆိုသည်မှာလည်း အကူအညီ အကြီးအကျယ်ရမှ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါတော့သည်။ ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ စစ်အစိုးရက ဤမြေကွက်များကို သိမ်းဆည်း၍ ကုမ္ပဏီများကို ပေးအပ် လိုက်မည့် အန္တရာယ်ကို မြင်နေရပါသည်။ ဒုက္ခသည်များမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဆုံးရှုံးရရုံမျှသာမက မြေပါလက်လွှတ်၍ ခရုဆန်ကျွတ် ဖြစ်ရမည့် အခြေအနေ ဖြစ်နေပါသည်။
ထိုသူများကို ကူညီရန် အဖွဲ့အစည်း၊ အဲန်ဂျီအို၊ သတင်းမီဒီယာများကလည်း အားကောင်းမောင်းသန် ရှိမနေကြပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံကဲ့သို့ လူသားလုံခြုံရေး ဌာနမျိုး၊ လူ့အခွင့် အရေး ကော်မရှင်မျိုးလည်း ရှိမနေပါ။ အဓမ္မ လုပ်အားခိုင်းစေခြင်းနှင့် မြေသိမ်းပိုက်ခြင်းဆိုသည်မှာ စစ်အစိုးရက မကြာခဏ ကျူးလွန်နေသည့် လက်ယဉ်နေသော အမှု ဖြစ်နေသည်။ ဤ အခြေအနေတွင် ပို၍ ဆိုးရွားနစ်နာရဖွယ် ရှိနေပါသည်။
ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း၏ ဆောင်းပါးတပုဒ်တွင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သူ ဧရာရွှေဝါ၊ ဇေကမ္ဘာ၊ ယုဇန၊ အေးရှားဝေါလ်၊ ထူး၊ ဧဒင်၊ ရွှေသံလွင်၊ မက်စ် မြန်မာနှင့် အက်ဖ်-အမ်-အိုင် စသည့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ ကို ကန်ထရိုက် ချပေးခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ ကန်ထရိုက်ချပေးခြင်း၊ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိသလို၊ သတင်း စာများတွင် ကြေငြာခေါ်ယူခဲ့ခြင်းလည်း မရှိပါ။ မေလ ၁၂ ရက် နေ့က ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တွင်ပြုလုပ်သည့် လေဘေးသင့် ဒေသများ ပြန်လည်ထူထောင်တည်ဆောက်ရေး အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပြီး လက်သင့်ရာ အခွင့် အရေးပေးခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေးရုံး (ဥဃံဗ) ၏ မေလ ၁၃ ရက်နေ့ ထုတ်အစီရင်ခံစာအရ ကျောင်းပေါင်း ၂ယ၄၀၀ ပျက်စီးခဲ့ရပြီး၊ ကလေးပေါင်း ၃၆၀, ၀၀၀ ၏ပညာရေး ထိခိုက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ ဤကျောင်းများ ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ယူနီဆက်ဖ်က ကူညီနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤအကူအညီများက လည်း စစ်အစိုးရ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် နီးစပ်ရာ ကုမ္ပဏီများ ပွဲခံကြမည့်ပုံ ဖြစ်နေ ဖြစ်နေပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ အတွေ့အကြုံအရ ကုမ္ပဏီကြီးများက မြေလုယက် သိမ်းပိုက်လာကြမည့် အရေးကိုလည်း ကြိုတွေးထားသင့်ကြပါသည်။ ဒုက္ခသည်များမှာ ရှင်သန်ရေးတိုက်ပွဲ အပြင် မြေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ကြရပါဦးမည်။ ဥပဒေကြောင်းအရ ဖြစ်စေ ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် အခြားဖြစ်နိုင်သော နည်းလမ်းများဖြင့် ပံ့ပိုးပေးကြပါရန်လည်း ကြိုတင် နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
မုန်တိုင်းသင့်ဒေသ ဆန္ဒခံယူပွဲ ထောက်ခံမဲရအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးပမ်း
ဆိုင်ကလုန်းလေမုန်တိုင်း ဘေးဒဏ်ခံခဲ့ရလို့ ရွှေ့ဆိုင်းထားတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ အခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုရေး နောက်ဆုံးအသုတ် ဆန္ဒခံယူပွဲတွေတော့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ အာဏာပိုင်တွေက နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ထောက်ခံမဲတွေသာ ရနိုင်ဖို့ ကျိုးပမ်းမှုတွေရှိခဲ့သလို ဒီကြားထဲကပဲ ကန့်ကွက်မဲတွေ ထည့်ဖြစ်အောင်ထည့်ခဲ့ ကြသူတွေလည်း ရှိနေတာပါ။ အကြောင်းစုံကို စုံစမ်းထားတဲ့ ဦးအောင်လွင်ဦးက တင်ပြပေးပါမယ်။
နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်း လေမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခဲ့ရာ ဒေသတွေမှာ ရွှေ့ဆိုင်းထားခဲ့တဲ့ အခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုရေး ဆန္ဒခံယူပွဲတွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရက အပြီးသတ်ကျင်းပလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ ဒီလိုကျင်းပတဲ့ နေရာမှာ အာဏာပိုင်တွေ ဖက်က နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ထောက်ခံမဲတွေ ရဖို့ ကျိုးပမ်းမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီး မြို့ခံတွေက ပြောပြကြတာပါ။ မုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းထဲက အပြီးသတ် လူထုဆန္ဒမဲ ကောက်ခံမှုတွေအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်း တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ထဲက အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ထောက်ခံမဲရဖို့ ကျိုးပမ်းပုံကို မြို့ခံတယောက်က ပြောပြရာမှာတော့ -
“ရပ်ကွက်တွေမှာ အားလုံးက တပြေးညီ အသံချဲ့စက်တွေ ဖွင့်ထားတယ်။ မဲရုံးကိုသွားဆိုတဲ့ သီချင်းရယ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အတည်ပြုရေး တို့အရေးတို့ကို ဖွင့်တယ်။ လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ သွားပေးရင်ပဲကောင်းမလား၊ မပေးရင်ပဲ ကောင်းမလား ဆိုပြီး တတ်တတ်ကြွကြွ သွားပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ အဖြစ်သဘောလောက်ပဲ သွားတာမျိုးပဲ တွေ့ရတယ်။ အဘွားကြီး မိသားစုတခုကတဲ့ သုံးဦး မဲထည့်ဖို့ သွားတဲ့အချိန်ကြတော့ ရာအိမ်မှူးက လာထည့်စရာ မလိုတော့ဘူး။ ခင်ဗျားအစားကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီးလို့ ပြောတော့ ဒေါကန်နေကြတာကို ကျွန်တော် တွေ့လိုက်တယ်။”
ဆန္ဒခံယူပွဲ မဲထည့်တဲ့နေရာမှာ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ မျက်စေ့ရှေ့မှောက်မှာ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း မဲတွေထည့်ခိုင်းတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ နောက်ထပ်ရန်ကုန်မြို့ခံတယောက်ကလည်း သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို အခုလို ပြောပြပါသေးတယ်။
“မဲလို့ သတ်မှတ်ထားတာက မဲမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ အိမ်မှာပဲ မဲစာရင်းကို ယူသွားတယ်။ အိမ်မျက်နှာစာရှေ့မှာပဲ ခုံလေးခုထားတယ်။ ခုံတခုပေါ်မှာ မဲပုံး သုံးပုံး တင်ထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အမှားအမှန်ခြစ်တဲ့နေရာလည်း သီးသန့်အခန်းရယ်လို့ မရှိဘူး။ အဲဒီ ခုံပေါ်မှာပဲ ရာအိမ်မှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူးတွေ ရှေ့မှာပဲ မဲအမှား အမှန်ကို ခြစ်ရတယ်။ အမှန်ကိုပဲ ခြစ်လို့ ပြောတဲ့အခါကျတော့ လူတွေကလည်း သူတို့ပြောတာကို ကြောက်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ တချို့ဆို လုံးဝသွားမထည့်ကြဘူး။ ထည့်ရင်လည်း အမှားထည့်လည်း သူတို့ကို မယုံကြည်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ အများကြီးရှိတယ်။”
အခုလ (၁၀) ရက်နေ့မှာ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲတွေ ပြုလုပ်ဖို့ သတ်မှတ်ထားခဲ့ပေမဲ့ လေမုန်တိုင်း ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့နောက် လေဘေးသင့် ဒေသတွေက လူထုဆန္ဒခံယူပွဲတွေကို အစိုးရက ၂ ပတ်ကြာ ရွှေ့ဆိုင်းထားတာ သတ်မှတ်ရက် ကုန်ဆုံးသွားတဲ့နောက် အခုလို ကျင်းပခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း လေမုန်တိုင်းဘေးဒဏ် ဆိုးဆိုးရွားရွား ခံခဲ့ရတဲ့ ဒေသတွေမှာတော့ ကျကျနန ကျင်းပနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမရှိသလို လေဘေးဒုက္ခသည်တွေ အနေနဲ့ လတ်တလော ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာတွေကိုသာ အာရုံစိုက်နေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ ဧရာဝတီတိုင်း ဘိုကလေးမြို့မှာ လေဘေး ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ကိုင်နေသူ တယောက်က ပြောပြပါတယ်။
“စာရင်းဇယားကတော့ တိတိကျကျမရနိုင်ဘူး။ ရသလောက်နဲ့ ကြိုတင်မဲ အနေနဲ့ ကောက်ထားတာ တွေ အများကြီးရှိတယ်။ တချို့ကလည်း လာမထည့်ကြဘူး။ အများဆုံးကတော့ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကျေမနပ်တွေ ဖြစ်နေကြတယ်။ ဘိုကလေးမြို့မှာ အုတ်တံတိုင်း နံရံတွေမှာ ကြက်ခြေခတ်အနီကြီးတွေ ခြစ်ပြီးတော့ ဖွဲ့စည်းပုံ အလိုမရှိဆိုပြီး ရေးထားတာတွေ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ မှတ်တမ်းလည်း ယူလာခဲ့တယ်။”
ဒီလို အာဏာပိုင်တွေရဲ့ စည်းရုံးမှုတွေအောက်ကပဲ ကန့်ကွက်မဲတွေ ထည့်ကြဖို့ လှုံ့ဆော်မှုတွေ ရှိခဲ့သလို ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးအောက်မှာ ကိုယ့်ဆန္ဒကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ကျိုးပမ်းကြသူတွေ ကလည်း ရှိနေတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက အဓိက အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး ပါတီကြီးတခုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ် ကိုယ်တိုင်လည်း မနေ့ကမှ မဲပေးခဲ့သူတဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးသိန်းညွန့် ရဲ့ အတွေ့အကြုံကတော့ -
“ကျွန်တော်တို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်မှာ မဲပေးနိုင်တဲ့သူက (၁၅၀၀)ကျော်ရှိတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေ အပါအ၀င်(၅၀၀)ကျော်ကိုတော့ ကြိုတင်ပြီးတော့ ထောက်ခံမဲရအောင်လုပ်ထားပြီးသား။ ဒီနေ့ (၈၆၀)မဲပေးတယ်။ အဲဒီမှာ ထောက်ခံတဲ့ မဲက (၆၈၉)မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲက (၁၄၂)မဲ ၊ ပယ်မဲက (၂၉)မဲရှိတယ်။ အဲဒီမှာ မဲရုံအဖွဲ့ဝင်ကတော့ ပြောတယ်။ ကန့်ကွက်မဲ(၁၀၀)ကျော်တဲ့ မဲတွေမှာတော့ ဗဟိုမှာတောင် ထုချေလွှာတင်ရမလားဆိုပြီး ပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကန့်ကွက်မဲ ၁၀၀ကျော်ကိုပဲ ကျေနပ်တယ်။ အခုချိန်မှာ အထွေထွေ ဖိနှိပ်မှုကြားကနေ ဖော်ထုတ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့အတွက် ဗမာပြည်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အနာဂတ်အတွက် မျိုးစေ့ ဘယ်လောက် ရှိသေး သလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ခန့်မှန်းလို့ရတာပေါ့။”
မြန်မာစစ်အစိုးရကတော့ အစောပိုင်း ဆန္ဒမဲတွေ ရေတွက်ပြီးတဲ့နောက် မဲပေးသူတွေရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်က တခဲနက်ထောက်ခံမဲပေးပြီး အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို အတည်ပြုထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ကြေငြာထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး အင်အားစု တွေနဲ့ လူအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေကတော့ ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ မသမာမှုတွေရှိတယ်၊ လွတ်လပ်တဲ့ အခြေအနေတွေအောက်မှာ ကျင်းပတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေကလည်း ရှိနေတာပါ။
International conference offers aid to Myanmar's cyclone victims, but access crucial
Donor nations said they were ready to provide Myanmar with more than 100 million dollars to help it recover from Cyclone Nargis, but warned its ruling junta Sunday they will not fully open their wallets until they are provided access to the hardest-hit areas.
U.N. Secretary-General Ban Ki-moon, speaking to The Associated Press afteraone-day meeting of 51 donor nations, said he believedaturning point had been reached in getting Myanmar's isolationist junta to allow foreign aid workers unhindered entry into the devastated Irrawaddy Delta.
"I'm cautiously optimistic that this could beaturning point for Myanmar to be more flexible, more practical, and face the reality as it is on the ground," Ban told The AP.
But Myanmar's leaders _ and potential donors _ continued to takeaguarded tone.
Myanmar's Prime Minister Lt. Gen. Thein Sein said international aid "with no strings attached" was welcome. But he hedged on the sensitive issue of direct access, saying only civilian vessels could take part in the aid operation, and they would have to go through Yangon.
"Relief supplies can be transported by land, air or sea," he said. "But if relief supplies have to be transported by water, civilian vessels can come in through Yangon port."
That seemed to nix plans for U.S., British and French warships loaded with humanitarian supplies to join in the relief operation. The ships have been off Myanmar's coast for more thanaweek.
Myanmar's leaders have virtually barred foreign aid workers and international agencies from the delta because they fearalarge influx of foreigners could lead to political interference in their internal affairs.
The junta is also hesitant to have its people see aid arriving directly from countries like the United States, which it has long treated asahostile power seeking to invade or colonize the country.
Thein Sein, saying that 3,200 tons of humanitarian supplies have already been delivered from abroad, presentedalong list of urgent needs, including temporary shelters, rice seeds, fertilizer, fishing boats and new salt factories.
Ban said the relief operation would last at least six months.
But skepticism hung over Sunday's conference.
"It is foralack of information that not more has been given at this particular time. The problem is not on the generosity, but the problem is one of establishing greater trust between Myanmar and the world community," said George Yeo, who is Singapore's foreign minister and chairman of the Association of Southeast Asian Nations, which co-hosted the meeting with the United Nations.
Washington's representative, U.S. Deputy Assistant Secretary of State Scot Marciel, said the United States was prepared to offer much more than the US$20.5 million (euro13 million) already donated. But the offer is on condition that international disaster experts are allowed to thoroughly assess affected areas.
"The United States is prepared to offer much more, and we know that we must act quickly to prevent further loss of life," Marciel said.
Australia and European diplomats, including those from Denmark, the Netherlands, Sweden and Germany, also offered conditional pledges.
"The reason we came is to support Ban Ki-moon," said Bert Koenders, the Dutch minister for development cooperation. "We're all very positive about what he has agreed with the government leader here, but also skeptical because you have to see the facts on the ground."
Myanmar's generals havealong history of making promises to top U.N. envoys, then breaking them when the international spotlight on their country fades.
The world body has repeatedly failed to convince the military to make democratic reforms and to release opposition leader and Nobel laureate Aung San Suu Kyi, whose five-year period of house arrest expires this week. Suu Kyi's house is just acrossalake and visible from the hotel where the conference was held
Nyan Win, spokesman for Suu Kyi's National League of Democracy, said Sunday there had been "no sign at all" that she would be released. He saidadecision on whether to free her or continue her detention would probably come Monday.
Ban did not push the matter, but said he regretted not being able to argue her case.
"I feel also very much concerned and troubled by not being able to address completely this issue," Ban said.
An estimate released Saturday by the U.N. said of the total 2.4 million people affected by the storm, about 42 percent had received some kind of emergency assistance. But of the2million people living in the 15 worst-affected townships, only 23 percent had been reached.
"Onlyafew weeks remain until the rice planting season begins," Ban said. "A failure to deal with this problem today will immeasurably compound our problems tomorrow."
BANGKOK, May 24 -- For five days, Soe Thein,aBurmese employee of Save the Children, traveled by wooden boat up and downacorpse-clogged river to deliver food and emergency supplies to cyclone survivors at the tip of the devastated Irrawaddy Delta.
"In my life, I have never seen so many dead bodies -- in the water, on the land," he said. "Every house on the bank of the creek was destroyed. We saw no sign of life, except dogs sitting near the destroyed place, howling."
The survivors Soe Thein and his colleagues finally found had little food and were "very much in need." "We went onalong, difficult journey to reach them," he said. "In terms of our religion, we didareally good deed."
Before Tropical Cyclone Nargis struck this Southeast Asian country, Soe Thein's job was to write reports about Save the Children's health and education projects. But as international charities struggle against government restrictions to help those in need, Burmese such as Soe Thein have been on the front lines of relief efforts.
Pulled from their regular jobs running HIV-AIDS clinics, education projects and other efforts, more than 1,000 Burmese employees of global nongovernmental organizations have been trying to deliver food, water, shelter and medical care -- often facing both infrastructure obstacles and official ambivalence.
Such deployments are routine in large-scale natural disasters, when NGOs dispatch all available workers. But in the three weeks since the cyclone, aid agencies have been deeply frustrated by the government's refusal to allow foreign veterans of other natural disasters to supervise novice Burmese relief workers.
"Without international staff in the field, our Burmese staff are having to make life-and-death decisions every day without the benefit of experience," said Andrew Kirkwood, country director for Save the Children.
U.N. agencies and international charities are hopeful that might soon change. On Friday, Senior Gen. Than Shwe, Burma's powerful military and government chief, told U.N. Secretary General Ban Ki-moon that foreign humanitarian workers will be permitted to join the relief effort. Aid agencies are now waiting to see how the situation develops.
Without guidance from experienced foreign aid workers, Burmese relief workers have grappled with unfamiliar circumstances. In one incident, inexperienced workers distributed milk powder for orphaned babies, not realizing that using contaminated water and dirty containers to make formula could jeopardize the babies' health.
From Rangoon, Burma's largest city, experts directed fieldworkers to find lactating mothers willing to feed the orphaned babies. But local aid workers have had difficulty talking to women about suchasensitive topic.
"We are trying to coach them from Rangoon, with terrible communications," Kirkwood said.
Official attitudes toward Burmese working for international charities have varied enormously. In some areas, they are working openly, sporting their organization's logo on caps and cars, with the full support of local military commanders. Elsewhere, military officials have welcomed them but asked that they keepalow profile and pose as local volunteers. A few commanders have insisted that aid workers give supplies to authorities for distribution.
Doctors Without Borders, which hadamajor operation in Burma before the disaster, deployed 200 of its nearly 1,000 Burmese staff members, including doctors, nurses and paramedics, to the disaster zone early on. The organization finally received permission this past week to send eight foreign experts, including water and sanitation specialists, into the affected area.
"We don't need an invasion of foreigners -- we have doctors to treat the wounds," said Frank Smithuis, country director of Doctors Without Borders-Holland, "but most people in Burma have not dealt with this kind of emergency before. But there are people who do this foraliving."
Most foreign experts, however, have remained confined to Rangoon, where they have hurriedly tried to pass on their skills to Burmese colleagues.
Katy Barnett,achild protection expert for Save the Children, is training Burmese in techniques of "child-tracing," to help reunite children and parents separated during the cyclone and its aftermath.
But Barnett expressed deep frustration with her inability guide the work.
"It's much easier to set up the system, monitor quality and build the capacity of the staff if I can go out and see it done, and demonstrate it done," she said. "Now there is no capacity for me to mentor people in the field."
BANGKOK — Donor nations, meeting Sunday in Myanmar, pressed the government to make good on its promise to give foreign aid workers free access to millions of isolated cyclone survivors.
Leading the one-day meeting of 52 countries, the United Nations secretary general, Ban Ki-moon, said that the government was “moving fast in the right direction” and that he was confident that Myanmar would honor the pledge, made to him on Friday by the country’s military leader, Senior Gen. Than Shwe.
Mr. Ban offered no details, according to reporters from news agencies who were permitted to accompany him in to Myanmar, which has otherwise barred entry to foreign journalists.
“There is good reason to hope that aid to the worst affected areas of Myanmar will increase significantly in the coming days,” Mr. Ban said. But he insisted that donors would need “unhindered access to the areas hardest hit by the disaster,” an access that so far has been denied to most foreigners.
Asked atanews conference about Daw Aung San Suu Kyi, the opposition leader whose year-to-year house arrest is expected to be extended shortly, Mr. Ban said, “We must think about people just now, not politics.”
Mrs. Aung San Suu Kyi, the symbol of her country’s democratic aspirations, has been held under house arrest for 12 of the last 18 years. Until now, her freedom has been at the top of the agenda of the United Nations in its dealings with Myanmar.
Several countries made preliminary pledges of tens of millions of dollars in aid but most were contingent on gaining greater access.
Myanmar is asking for about $11 billion in reconstruction aid.
In the three weeks since Cyclone Nargis struck — leaving at least 134,000 people dead or missing — about 42 percent of the 2.4 million people affected by the storm have received some form of aid, the United Nations said inanew assessment issued Saturday. But it said only 23 percent of the two million living in the hardest hit areas had been reached by aid.
Relief experts speak ofa“second disaster” involving deaths from disease and lack of medical treatment should large-scale aid continue to be delayed.
In the first public comment by the government since the pledge to Mr. Ban, Myanmar’s prime minister, Lt. Gen. Thein Sein, appeared to confirm the new policy. “We would warmly welcome any assistance and aid which are provided with genuine good will from any country or organization, provided that there are no strings attached nor politicization involved,” the general said.
That invitation did not appear to include American, British and French naval ships that have been cruising off the Myanmar coast loaded with supplies, equipment and small boats.
The official press in Myanmar has stated that no naval vessels would be permitted to deliver supplies. Over the past week, under an agreement with the government, American military aircraft have made 60 landings with relief supplies in Yangon, the country’s main city, but Americans arriving with the deliveries have been confined to the airport. Americans took part in the conference and were among the parties seeking greater access for their aid workers.
At least one United Nations aid agency, Unicef, said there were signs that its foreign workers, who have been confined like most foreigners to Yangon, would be allowed to travel into the hard-hit countryside as early as Monday.
“We are starting to detectabit more flexibility, if you will, in terms of the government letting international staff into delta areas,” said Michael Bociurkiw,aspokesman for Unicef, speaking by telephone from Myanmar. “This is something we have been waiting for, and it seems to be happening soon after the secretary general’s report.”
The prime minister wasalittle less clear on this point. “We will consider allowing them if they wish to engage in rehabilitation and reconstruction work, township by township,” he said.
Until now, the military has mostly insisted that all aid must go through its hands and has even confiscated supplies from residents who try to distribute it.
Like some other relief agencies including the Red Cross, Save the Children and World Vision, Unicef has been able to deploy local staff members in the affected areas and to deliver mostly supplies already stockpiled in the country.
But the groups say that foreign experts would bring crucial knowledge and experience toahuge and complex task.
About 500 delegates from donor nations attended the conference, headed jointly by the United Nations and the Association of Southeast Asian Nations.
A point of contention between Myanmar and potential donors is the nature of the emergency. The government asserts that the emergency phase of recovery is over, and it is asking for economic assistance to rebuild shattered towns, rehabilitate contaminated rice fields and replace livestock swept away by the storm.
But with hundreds of thousands of survivors still stranded without help, Mr. Ban said, “The needs remain acute — from clean water and sanitation to shelter, medical supplies and food.”
In addition, he said, “Onlyafew weeks remain until the rice-planting season begins. Millions of people depend on this next harvest, atatime when food prices are soaring around the world.”
He added: “I expect the relief effort will run for several months, probably six months at least, as we feed and care for those who have lost everything.”
The United States was prepared to offer much more than the $20.5 million it has already donated, said Scot Marciel,adeputy assistant secretary of state. But he said that further aid was contingent on improved access to the worst-hit areas. Later Sunday, The Associated Press reported, Australia and several European nations also pledged to give aid if relief workers were allowed free access, bringing the total pledged to more than $150 million.
A British government minister has said it's time for the Burmese generals to turn into action, their promises to allow more international access to the Irrawaddy Delta, to aid thousands of cyclone victims still in desparate need.
The minister, Douglas Alexander, was speaking to the BBC in Rangoon atadonor meeting to pledge more help to Burma. He said aid was still not reaching nearly enough people, and needed to be scaled up.
Meanwhile the Burmese Planning Minister, Soe Tha, has released remarkably precise figures on the losses caused by Cyclone Nargis: They include nearly seven-hundred-thousand ducks, more thanamillion-and-a-half chickens, large numbers of pigs, cows, buffalo, sheep and goats.
Burma's opposition leader due for release
As the world focusses on humanitarian relief for survivors of Cyclone Nargis the leader of Burma's pro-democracy movement, Aung San Suu Kyi, is endingafive year period of house arrest this week ... but correspondents say her release is unlikely.
The leader of the National League for Democracy party has been detained for thirteen of the last nineteen years. Her party won an overwhelming victory in the last free election in Burma, in 1960, but the military refused to hand over control.
On Saturday the military government completed the holding ofareferendum onanew constitution, which it describes as part ofaroad map to democracy - but critics say it would only entrench military rule, and Aung San Suu Kyi would not be allowed to stand for election as her late husband wasaforeigner.
Update: May 24, 2008 25:15 - Burma Standard Time
Even as local authorities became busy with the referendum polling for the 47 disaster-hit townships in Irrawaddy and Rangoon division, the junta made no public announcement abiut it.
Local residents in Rangoon said, the state-run television channels MRTV, MRTV3 and MRTV4 has not broadcast any news or information regarding the referendum.
As scheduled, Poll booths at Thingankyun Township in Rangoon closed as the clock strikes four in the evening.
"At4p.m the booths are closed. But till now there was no counting of the votes. There are many people who did not vote. And most people in our locality cast 'No' votes. There are several USDA members watching over the polling. But everything was smooth with out any disturbances. We did not care about the consequences and cast 'no'. But the authorities are also clever, they have collected all the 'yes' votes in advance because they know people coming here will vote 'No'."
Local residents and members of Human Rights Defenders and Promoters said authorities at polling booths in Kyimyindine and North Okklapah townships in Rangoon forcibly tick ballots without the wishes of the voters and made them cast 'yes' votes.
Prominent Actor Kyaw Thu unaware of referendum
Burma's prominent actor Kyaw Thu said he was not even aware of the referendum polling being held for 47 townships in Rangoon and Irrawaddy division as he was fully engaged in helping out the victims of Cyclone Nargis.
"Honestly, I am not even aware that the referendum polling is today. I will not cast my vote because there are volunteers who came to our office between7a.m to 8 p.m to help the cyclone victims. So, when I reached home the polling booths will be closed."
Kyaw Thu, who headed the Free Funeral Service, has been engaged in helping victims of the cyclone since May 9, going to places in Rangoon division. The group has now expanded their operation to the Irrawaddy delta and have been distributing basic ration such as rice, oil, salt and clothes and plastic sheeting to more than 100 places in Rangoon and Irrawaddy divisions.
A resident in Tamwe township of Ragoon said, "Local authorities collected the votes in our ward about ten days ago. 'We all cast 'yes' votes because they said we don't need to come on May 24' so in order to avoid all the hassle we cast our votes in advance. Even if we go to vote it makes no difference because they have already got what they want. And they will do everything to win. What is important now is relief for the cyclone victims."
A resident at Shan street in Myaenikone in Rangoon, who has been helping cyclone victims, said it is unfair and unjust to be voting while several people are on the brink of death.
"How can I vote while many people are dying. It is more important to save lives. The government has already got what they want. I don't even know where the booths are. Nobody in my locality seems to be interested in the referendum. I am now planning to go to Hlaing Tharyar to help cyclone victims. All of our friends will gather and bring food supplies."
"I did not vote today, because I was not registered as I had to shift my home. I shifted within Rangoon itself but because of it I did not get registration. And I did not even try to register myself to where I shifted. Because I was busy travelling to the cyclone affected areas. I had to go to places and help people. I went to Dea Da Ye, Kun Chan Kone, and other places with colleagues from the film industry and other NGOs. That's why I gave votingamiss."
Interview withaBuddhist monk at the old-age home in Pawdawmu ward of Bogale in Irrawaddy division.
"I don't know if the refugees cast their votes but we are worried rergarding their survival and are collecting money to get some aid for them. Nobody came to say anything here. Many people said they are not even aware of the polling today. They are struggling to survive because it is more important. They are finding it difficult to get enough food."
A voter in Thwante town of Rangoon division said authorities showed voters in the booth how to 'tick the votes'.
"There are two polling booths in our locality Zaethit ward. Authorities asked every one who came to vote, to 'tick'. The authorities and even the commission of the booth Ma Myint and Daw Amar would tell people what to do . The authorities including the chairman of the ward came from house to house and gave us sample ballot papers. At the back of the ballot, there were the names, addresses, and identity card numbers."
"Most of us crossed the ballot, and when I asked people close to me they all said they have crossed the ballots."
"There were no policemen but there were about 10 people including USDA members. One of my friends from Moemaka village in Thwante township told me that they were given onlyaslip of paper and were told to return saying their votes had been cast."
"The polling booths are open from9a.m to 1 p.m. the voting in our place Thanlyin town's Myoma Taung ward is not at all honest. The authorities said we have to cast our own votes but they accept people to vote on behalf of their family members. U Thein Lwin, who cast his votes at the no. (1) polling booth also cast votes for his six family members. As far as I know more than 30 families have been casting votes on behalf of their family members."
"Authorities in the polling booths force the people to tick their votes. Specially those who does not know anything, they would ask them to tick their ballot papers. But for me I crossed the ballot because I don't like the way they are doing things. In Thanlyin there are 18 wards, and people said the same things happened in other booths too."
နာဂစ် ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်အပြီး ဖြစ်ရပ်ဆိုးများ
သောကြာနေ့၊ မေလ 23 2008 15:47 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ရန်ကုန် - ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသအတွင်း အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းများ အမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ် လာနေသော်လည်း၊ ထိုဒေသများသို့ သွားရောက်ခွင့်ကို အစိုးရက ဆက်လက် ကန့်သတ်မှုများ ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် လူအသေအပျောက်နှင့် အပျက်အစီး အတိုင်းအတာ ပမာဏကို ယခုတိုင် အတည်ပြု၍ မရသေးဘဲ ရှိသည်။
ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း လေဘေး ဒုက္ခသည်များ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေကြရသော ကြောက်မက်ဘွယ် အခက်အခဲများကို အစိုးရက ခွင့်ပြု၍ သွားရောက်ခွင့် ရခဲ့သည့် အနည်းငယ်မျှသော အကူအညီပေးရေး လုပ်သားများနှင့် ထိုဒေသတွင်းသို့ ခိုးဝင်ကာ သတင်းများ ရယူခဲ့ကြသည့် ဒေသခံနှင့် နိုင်ငံတကာ သတင်းသမားများထံမှ တဆင့်သာ သိရှိကြရသည်။
အမျိုးမျိုးသော အကန့်အသတ်များကို ကျော်လွှား၍ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသသို့ အကြီးအကျယ် စွန့်စား ခိုးဝင် သွားရောက်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်မြို့မှ မဇ္ဈိမ သတင်းထောက်က သူမြင်ခဲ့ကြားခဲ့သည်များကို အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်း ပြောပြထားပါသည်။
နာဂစ် ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း အကြီးအကျယ် ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံလိုက်ရသည့် မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသတွင် ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ် ကြာမြင့်သည်အထိ ရွာများ၏ အဖြစ်အပျက်များ ပုံရိပ်များမှာ အခက်အခဲ အပြည့်၊ စိတ်ပျက် အားငယ်မှု အပြည့်သာ ရှိနေသေးသည်။ အချို့သော ရွာများဆိုလျှင် လူနေအိမ်ခြေများပင် မရှိတော့ပါ။
လပွတ္တာမြို့ တောင်ဘက် လှေဖြင့် ၂ နာရီ ခရီးသွားရသည့် ဘီတွတ်ကျေးရွာတွင် မုန်တိုင်းမတိုက်မီက လူဦးရေ ၉၁၆၉ ရှိခဲ့ပြီး ၉၁၁ ဦး မုန်တိုင်းအတွင်း သေဆုံးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ လူဦးရေ ၁ဝ၆၈၂ ရှိသော မြစ်ပေါက်ရွာတွင် ၄၆၄၉ ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ၊ လူဦးရေ ၆၂၁ဝ ရှိသော မောင်ငယ်ရွာတွင် ၁၂၄၇ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ ထိုရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းသား ကလေးငယ်အားလုံး တယောက်မကျန် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။
ဒေသခံ စေတနာ့ဝန်ထမ်း တဦးက မေလ (၁၆) ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီ မြစ်လက်တက်တခုတွင် စောင့်ကြည့်ရာ ၃ မိနစ် အတွင်း အလောင်း ၂၇ လောင်း မျောပါသွားသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ ထိုအထဲတွင် ကလေးငယ် ၅ ဦးနှင့် သံဃာတော် ၇ ပါး ပါဝင်သည်။ ဇီးဖြူ ကျေးရွာတွင် သူငယ်တန်းမှ ၇ တန်းအထိ ကျောင်းသားပေါင်း ၁၉၇ ယောက် ရှိရာ မုန်တိုင်း အပြီးတွင် အယောက် ၅ဝ သာကျန်သည်။ စစ်ကုန်းကျေးရွာတွင်မူ ပင်လယ် ဆားငံရေများ ဝင်ကာ ရေလွှမ်းနေသည့် လယ်ကွင်းများထဲတွင် ပုပ်ပွနေသော အလောင်း ၁၂ လောင်း ကို ဟိုနေရာတလောင်း ဒီနေရာတလောင်း ပျံ့ကြဲနေသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အနီးအနားတွင် မြေပြင်ပေါ် ပြိုလဲပျက်စီးနေသည့် ဝါးဖြင့် ဆောက်ထားသော တဲအိမ်များကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
ကွမ်းခြံကုန်းနှင့် ဒေးဒရဲအကြား ကျေးရွာများသို့ သွားရောက်နိုင်ခဲ့သည့် အခြား ဒေသခံ တဦးကလည်း အလားတူ အသေအပျောက်များ၊ အပျက်အစီးများ၊ တာရှည်နေပြီ ဖြစ်သည့် ဆင်းရဲဒုက္ခများကိုသာ ပြန်လည် ပြောပြကြသည်။ ကြက်ဆင်ဖြူ ကျေးရွာသို့ မေလ (၁၁) ရက်နေ့က သွားရောက်ခဲ့ရာ လူဦးရေ ၁ဝဝ ကျော်တွင် ၈ ဦးသာ မုန်တိုင်းအပြီး အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထူးခြားသည်မှာ အဆိုပါ အသက်ရှင်ကျန်သူ ၈ ဦးအနက် ၄ ဦးမှာ လသား ကလေးများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုဒေသတွင် အတွေ့ရများသည့် ရာဝင်အိုးကြီးများတွင် ကလေးများကို ထည့်ထားခဲ့သဖြင့်သာ ထိုအိုးကြီးများ မုန်တိုင်းအတွင်း ရေပေါ်တွင် မျောပါကာ ကလေးများ အသက်မသေ ကျန်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် အဆိုပါ လသားကလေးများ အားလုံး ယခုအခါ မိဘမဲ့ ကလေးများ ဖြစ်သွားကြပြီ ဖြစ်သည်။
ကြက်ဆင်ဖြူ ကျေးရွာမှ သူယခင် စာသင်ကြားပေးခဲ့ဖူးသည့် ခေါင်လှသည့် “အမည်မဲ့ ရွာကလေး” သို့ ဆက်လက် သွားရောက်ခဲ့သည်။ “ဘာမှ မရှိတော့ဘူးဗျ၊ ရွာလဲ မရှိတော့ဘူး၊ အိမ်တွေလဲ မရှိတော့ဘူး” ဟု အဆိုပါ ကျောင်းဆရာက သူမြင်ခဲ့ရသမျှကို ပြောပြသွားပါသည်။ သူတွေ့ကြုံခဲ့ရသမျှမှာ အပျက်အစီးပုံများ အောက်က ပေါ်ထွက်လာသည့် သူ့ ကျောင်းသားဟောင်းများ၏ “တစ္ဆေသံများ” သာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဤဝေးလံ ခေါင်သီလှသည့် နေရာတွင် တချိန်က ရှိခဲ့ဖူးသည့် အမည်မဲ့ ရွာကလေး အကြောင်း ထိုရွာကလေးမှ ရွာသားများ အကြောင်း နောင်တချိန်တွင် သမိုင်းကမေ့ ပျောက်သွားမည်သာ ဖြစ်သည်။
ဤမြင်ကွင်းများကို နိုင်ငံတကာ အကဲခတ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများက မြင်တွေ့ခွင့် ရကြမည် မဟုတ်ပေ။ သူတို့ကို အဓိက မြို့များဖြစ်သည့် ဒေးဒရဲ နှင့် လပွတ္တာသို့သာ သွားခွင့် ပြုထားသည်။ ထိုအတောအတွင်း ကျေးလက်ဒေသရှိ လေဘေး ဒုက္ခသည်များ၏ ဒုက္ခမှာ တိုး၍သာလာနေသည်။
အဆိုပါ ကျေးရွာများသို့ မုန်တိုင်းကျအပြီး တပတ်အကြာ မေလ (၁ဝ) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်သည့် ထောက်ခံမဲများ ရရှိပြီး ဖြစ်သည်ဟု စစ်အစိုးရက မေလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် ကြေညာအပြီးတွင်မှ သွားရောက်ခွင့် ပေးခဲ့ခြင်းကို မတွေးတတ်အောင်ပင် ဖြစ်ရသည်ဟု ဒေသခံစေတနာ့ ဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများက ပြောဆိုကြသည်။ ဤဆန္ဒခံယူပွဲကို ကျင်းပခဲ့သော ဒေသများရှိ ပြည်သူများက စိတ်လည်း မဝင်စားခဲ့၊ ဝင်ရောက် ဆင်နွှဲနိုင်ခြင်းလည်း မရှိပါ။ ရီစရာကောင်းသည်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် ခိုလှုံနေကြရသော လေဘေးဒုက္ခသည်များကို သူတို့၏ ပျက်စီးသွားပြီ ဖြစ်သည့် ကျေးရွာများသို့ ပြန်ရန် အတင်းအကြပ် လိုက်လံ မောင်းထုတ်လျက် ရှိပြန်သည်ဟု သတင်းများ ရရှိပါသည်။ အတည်ပြုပြီး ဖြစ်သည်ဟု ကြေညာခဲ့သော အဆိုပါ ဆန္ဒခံယူပွဲကို မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒေသများတွင် မေလ (၂၄) ရက်နေ့၌ ထပ်မံ ပြုလုပ်ဦးမည် ဖြစ်သည်။
ဘီတွတ်အကြောင်း ပြန်ပြောရလျှင် စိတ်ပျက်အားငယ်ကာ ကြံရာမရ ဖြစ်နေသည့် လူ ၃ ဦးက အလောင်းများမှ လက်ချောင်းများနှင့် နားရွက်များကို ဖြတ်ကာ လက်ဝတ် ရတနာများ ဖြုတ်ယူခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်တခု ဖြစ်ပွါးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂ ဦးမှာ အာဏာပိုင်များထံ တိုင်ကြားခံခဲ့ရပြီး အကျဉ်းနည်းဖြင့် ကွပ်မျက် စီရင်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ယခုအခါ ဤဒေသ တခုလုံးကို မကြေညာသည့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြင့် အုပ်ချုပ်လျက် ရှိသည်ဟု ပြောဆိုမှုများ ပေါ်ထွက်နေသည်။
ရေသန့် ဆေးပြားများ မရှိသဖြင့် ဒေသအချို့တွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ရောဂါမှာ ကပ်ရောဂါ အသွင်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာလျက် ရှိသည်။ ပုပ်ပွနေသော တိရိစ္ဆန် အသေကောင်များ မျောပါနေသည့် ရေကန်များမှ နံစော်နေသည့် ရေများကိုသာ ရွာသားများ သောက်သုံး နေကြရသည်။
သောက်သုံးရေသန့် မရရှိခြင်းက ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဝေမှု အကြီးအကျယ် မလုံလောက်ကြောင်း၊ ထိုသို့ ဝေငှနိုင်စွမ်း မရှိကြောင်း ပြသနေသည်။ ယခုအခါ အဆိုပါ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများအတွက် ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်များကိုသာ အဓိက မှီခိုနေရသည်။ ရေနံနှင့် ဓါတ်ငွေ့ဝန်ကြီး၏ ဇာတိရွာ ဖြစ်သည့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ ကျုံနဒါးရွာကိုမူ အကြီးအကျယ် ကယ်ဆယ် စောင့်ရှောက်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုရွာနှင့် မလှမ်းလှသည့် အိမ် ၂ဝဝ အနက် ၁၉၄ လုံး ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့် ရွာတွင် လူ ၂ဝ သေဆုံးခဲ့သည်။ သို့သော် ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းအဖြစ် ပေးအပ်သည့် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများမှာမူ အိမ်တလုံးစာသာ ရှိသည်။ ဒါတောင် ဆောက်လုပ်စရာ လက်နက် ကိရိယာ ဘာမျှမပေး။
ဖျာပုံတွင်မူ ရေတပ် တပ်ကြပ်ကြီးတဦး၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့် အာလူခင်းများ ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ လပွတ္တာတွင်မူ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများကို အစိုးရ ဂိုဒေါင်တွင်းသို့ သွင်းရန် ဒေသခံများကို အခကြေးငွေပေး၍ ငှါးရမ်း ခိုင်းစေခဲ့သည်။ ဤဂိုဒေါင်များမှ ပစ္စည်းများ ဒုက္ခသည်များထံသို့ ရောက်မည် မရောက်မည်ကိုမူ မသိရသေးပါ။ UN, WFP, JICA, MSF, MERLIN and Melteser တို့မှ ဒေသခံဝန်ထမ်းများမှာ သူတို့၏ စေ့စပ် သေချာလှပြီး အလျှံပယ် ပေါကြွယ်ဝလှသည့် စာရွက်စာတမ်း များဖြင့်သာ အလုပ်ရှုပ်နေကြပြီး အကူအညီ အရေးတကြီး လိုအပ်နေသော ဒုက္ခသည်များထံသို့ အကူအညီများကို မပေးအပ်သေးဘဲ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားနေတုံး ရှိသေးသည်ဟု ပြောဆိုမှုများလည်း ပေါ်ထွက်လာနေသည်။ လပွတ္တာတွင် မြို့ပေါ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လာသော လူဦးရေက UNDP က ခန့်မှန်းထားသည်ထက် အများကြီး ပိုနိုင်သည်ဟု ပုဂ္ဂလိက လေ့လာ အကဲခတ်သူများက ပြောကြပါသည်။
မုန်တိုင်းဒဏ် အဆိုးဝါးဆုံး ခံခဲ့ရသော ဤလယ်သမားများ၏ ရေရှည် အနာဂါတ်ကကော မည်သို့မည်ပုံ ရှိပါမည်လဲ။ လယ်သမားများက သူတို့ချစ်သည့် လယ်ကွင်းများသို့သာ အရောက် ပြန်ချင်သည်ဟု ပြောဆိုကြသည်။ သို့သော် လယ်ကွင်းများ ပျက်စီးပြီး၊ ပိုဆိုးသည်မှာ ကျွဲနွားများလည်း ဆုံးရှုံး ခဲ့ကြရသည့် သူတို့အတွက် ဘယ်လို လယ်လုပ်ရပါမည်လဲ။ စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးကမူ အဆိုပါ ကျွဲနွားတိရိစ္ဆာန်များကို အစားထိုးရန် ယခုနှစ်ကုန်တွင် စက်ယန္တရားများ အလုံအလောက် ရရှိမည်ဟု ဆိုသည်။ နာဂစ်မုန်တိုင်းက ဖျက်ဆီးသွားခဲ့သမျှကို ဤစက်ယန္တရားကြီးများဖြင့် အစားထိုး လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် ဤစက် ယန္တရားကြီးများကို မည်သို့ ကိုင်တွယ်မောင်းနှင်ရမည် ဆိုသည်ကို လယ်သမားများ မသိပါ။ လယ်သမားများကမူ ကျွဲနွားများကိုသာ လိုချင်နေကြသည်။
အပျက်အစီး အတိုင်းအတာကို အထက် အာဏာပိုင်များ မသိစေရန် ဒေသခံ အာဏာပိုင်များက ဖုံးဖိထားသည့် ကိစ္စမှာ ယခုအခါ ပိုမို ထင်ရှားလာနေပြီ ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ ခရီးစဉ်မတိုင်မီ သူလာမည့် လမ်းတလျှောက် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သို့ ဝင်ရောက်ရာ အဓိက လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်များ၏ ကားများကို မောင်းထုတ် ဖယ်ရှားခဲ့ခြင်းက ထိုဖြစ်ရပ် မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေ ပြနေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် မုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရသော ဒေသများသို့ ၂ ပတ်ကြာမှ ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အကူအညီပေးရေး လုပ်သားများနှင့် မီဒီယာများမှ တင်ပြသော သတင်းများ အစီရင် ခံချက်များမှာလည်း တဦးချင်းစီ အပေါ်တွင်သာ မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုး ကွဲပြားစွာ ဖေါ်ပြနေကြသည်။
သူတို့လုပ်ငန်းတွင် အကူအညီ ရစေရန် အချို့က ပိုပိုသာသာ အကောင်း ရေးနေကြပြီး၊ အချို့ကမူ ကြီးမားသော အတားအဆီး အကန့်အသတ်များကြောင့် အဖြစ်မှန်နှင့် ဝေးလျက် ရှိသည်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ကျေးလက်ဒေသ၏ ဘဝမှာ ယခုအခါ လုံးလုံး ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ထို အပျက်အစီးများကို ပြန်လည် ပြုပြင်ရန် လုံလောက်သည့် အကူအညီများ သိသိသာသာ တိုးမြှင့်ရရှိခြင်း မရှိလျှင် အခြေအနေမှာ ပို၍ ဆိုးသွားဘွယ်ရာ ရှိနေသည်။ ယခု အသစ်တဖန် ထပ်မံ စိုးရိမ် နေရပြန်သည်မှာ ဤဒေသ၌ နောက် ၃ လအတွင်း ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးမှုဘေးကြီးနှင့် ကြုံတွေ့ရမည့် အရေးဖြစ်သည်။ အများအပြား သေကြေ ပျက်စီးခဲ့ရသည့် ဤလူထုထံသို့ နောက်ထပ် အနိဌာရုံများ စုပုံ ရောက်ရှိလာဦးမည် ဖြစ်သည်။
စနေနေ့၊ မေလ 24 2008 14:11 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ မုန်တိုင်းသင့် ရုပ်အလောင်းများ မြစ်ချောင်းများအတွင်း မျောပါနေခြင်းဖြင့် ငါးများမှတဆင့် ရောဂါ ကူးစက်ဖွယ်မရှိကြောင်း ဌာနဆိုင်ရာ ဆရာဝန်တဦးက ပြောသည်။
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ရုပ်အလောင်းများ မြစ်ချောင်း၊ ပင်လယ်တွင် မျောပါနေသည်ဟူသော သတင်းစကားကြောင့် ငါးစားသုံးရမည်ကို စိုးရွံ့လာသဖြင့် ဒေသအချို့တွင် ငါးဈေးများ ထူးခြားစွာ ဈေးကျဆင်းကုန်သဖြင့် မဇ္ဈိမက မေးမြန်းကြည့်ရာတွင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှ တာဝန်ကျ ဆရာဝန်တဦးက ယခုလို ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
''စားတဲ့သူတွေက ဒီမြစ်ထဲက ငါးတွေကနေ တီဘီ၊ ၀မ်းရောဂါတို့လို ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေရမှာ ကြောက်ကြတယ်။ အဓိကကတော့ စိတ်မသန့်ကြဘူးပေါ့။ မွေးမြူရေး ငါးတွေကိုတော့ ကျနော်တို့လည်း စားနေပါတယ်။ တကယ်လို့ ရောဂါ ကူးစက်တာတွေ ရှိမယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာက ထုတ်ပြန်မှာပေါ့" ဟု ဆရာဝန်က ပြောသည်။
ထို့အပြင် ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသား ကျန်းမာရေး သုတေသနဌာနသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ မွေးမြူရေးငါးများကို စိတ်ချစွာ စားနိုင်ကြောင်း အရာရှိ တဦးကလည်း ပြောပြသည်။
မုန်တိုင်းပြီးသည့်နောက် ငါးများမှတဆင့် ရောဂါကူးစက်နိုင်မှုကို လည်းကောင်း၊ ငါးစားသုံးမှု တားမြစ်ခြင်း တစုံတရာကို လည်းကောင်း ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာမှ ထုတ်ပြန် ကြေညာထားခြင်း မရှိသေးပါ။
ရုပ်အလောင်းများ မြစ်ချောင်းများအတွင်း မျောပါနေသည် ဟူသည့် သတင်းကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများမှ ရေး၊ ထားဝယ်၊ မြိတ်မြို့နယ်တို့တွင် ပင်လယ်ငါးစားသုံးမှု လျော့နဲသွားရာမှ ငါးဈေးများ ထိုးကျနေသည်။
"အမတို့က ငါးကြိုက်ပေမယ့် မုန်တိုင်းပြီးကတည်းက ဘာငါးမှကို မစားတော့တာ။ ငါးတွေက ဒီအလောင်းတွေကို စားမိကြမှာ ဆိုတော့လေ။ ၀မ်းပျက်တာတွေ၊ ၀မ်းလျှောတာတွေ ဖြစ်မှာစိုးလို့။ ပြီးတော့လေ ဘယ်လိုပြောရမလဲ စားရမှာ မသတီတော့ဘူးပေါ့" ဟု ရန်ကုန် ဒေသခံ အိမ်ရှင်မတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
"အန်တီတို့က ခြေလေးချောင်းလည်း မစား၊ ကြက်သားလည်း နေ့တိုင်းစားဖို့ မဖြစ်တော့ တီလားပီးယားလို မွေးမြူရေးငါးတွေပဲ ရွေးစားနေရတယ်။ ပင်လယ်ငါးတော့ လုံးဝ မစားတော့ဘူး" ဟု အိမ်ရှင်မတဦးက ပြောသည်။
ယခင်က မွေးမြူရေးငါး တီလားပီးယားငါး တဆယ်သားလျှင် ၉၀ ကျပ်မှ ၁၂၀ ကျပ်နှုန်းရှိရာမှ ၁၈၀ ကျပ်နှင့် အထက်သို့ တက်သွားသလို၊ တဆယ်သားလျှင် ၂၄၀ ကျပ်မှ ၂၅၀ ကျပ်ရှိသော ငါးမြစ်ချင်းဈေးမှာလည်း ၅၀၀ ကျပ်အထိ ခုန်တက်သွားကာ အရွယ်တော် ပုဇွန်ဈေးမှာလည်း ၆၀၀ ကျပ်ခန့်မှ ၁၃၀၀ ကျပ်အထိ ဖြစ်နေသည်။
အကျပ်ရိုက်သူများမှာ လက်လီ လက်ကား ငါးရောင်းချသူများဖြစ်သည်။ "အရင်ကဆို နေ့လယ်လောက်ဆို ငါးတွေက ကုန်သလောက်ပဲ။ အခုဆို ဈေးပိတ်ချိန်အထိ ငါးတွေက တော်တော် ကျန်နေသေးတာ။ တဆိုင်ဆို မထွက်တာ ၅ ရက်လောက်ရှိနေပြီ" ဟု လှည်းတန်းဈေးသူတဦးက ဆိုသည်။
ဈေးကွက်အတွင်း ပင်လယ်ငါးများ ၀င်ရောက်မှုမှာလည်း ယခင်ထက် ထက်ဝက်ခန့်ကျသွားသည်။ "ဆိုင်တဆိုင်ဆို ပင်လယ်ငါးနဲ့ မွေးမြူရေးငါးတွေပဲ ရောင်းတာ။ ရန်ကုန်တ၀ိုက်က ငါးကန်တွေ ငါးဒိုင်တွေက ယူတယ်။ မွေးမြူရေးငါးပါလို့ ပြောတာတောင် မ၀ယ်ကြဘူး။ ခါတိုင်းဆို အရမ်းရောင်းရတာ။ အခုက သုံးပုံတပုံလောက် ရောင်းအားကျတယ်လို့ ညည်းနေတယ်" ဟု ပုဇွန်တောင်ဈေးသားတဦးက ပြောသည်။
ငါးစိမ်း ဈေးကွက်သာမက ငါးကို အဓိကထား၍ ချက်ရသော မြန်မာ့ရိုးရာ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်များလည်း အရောင်းကျဆင်းသွားသည်။ အမဲ၊ ၀က်နှင့် ကြက်တို့ကို ပိုမိုစားသုံးလာကြပြီး အစားရှောင်သူအချို့ကတော့ ကန်များဖြင့် မွေးသော မွေးမြူရေးငါးများကို စိစစ်စာသုံးနေကြ၍ မွေးမြူရေးငါးနှင့် ပုဇွန်ဈေးက မုန်တိုင်း မတိုက်မီကထက်စာလျှင် နှစ်ဆကျော်အထိ တက်သွားသည်။ ထို့အပြင် ဧရာဝတီတိုင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှ ငါးလုပ်ငန်းသုံး စက်လှေများ ပျက်စီးမှု များပြားခဲ့၍ သယ်ယူခများ တက်လာသည်ကလည်း အကြောင်းအချက်တခု ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်သို့ အများဆုံးတင်ပို့သော တွံ့တေးဖက်မှ မွေးမြူရေး ငါးကန်၊ ရေချိုပုဇွန်ကန်များမှာ ပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ ပုံမှန်အတိုင်း ရောင်းချနေသော်လည်း စားသုံးသူ နည်းနေဆဲ ဖြစ်သည်။ "ကျနော်တို့ဘက်က ပုဇွန်ကန်တွေလည့်း ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ကန်ကတော့ ဖော်တော့မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဈေးကွက်အတွက်တော့ စိတ်ပူနေရတာပေါ့" ဟု ပုသိမ်မှ ပုဇွန်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းရှင်တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မန္တလေး၊ မကွေး၊ တောင်ကြီးကဲ့သို့သော ဒေသများတွင်မူ ငါးဈေးမှာ ပုံမှန်အတိုင်း ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားလျက် ရှိသည်။ မြစ်ချောင်းများ အတွင်းမှ ရသော စားသုံးသူများသည့် ငါးများမှာ ငါးခူ၊ ငါးကျည်း၊ ငါးရံ့ ကဲ့သို့သော ငါးများဖြစ်ပြီး ရေငံတိုး ရေချိုမြစ်တွင်းငါးမှာ ငါးသလောက် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အများဆုံးစားသုံးသော ရေချိုငါးမှာ ငါးမြစ်ချင်း၊ ငါးကြင်း၊ ငါးဒန်၊ တီလားပီယား၊ ငါးဖယ် တို့ ဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ငါးမှာ ကတ်သပေါင်း၊ ငါးရွှေ၊ ပြည်ကြီးငါး၊ ငါးဗျက်၊ ငါးပုတ်သင် စသည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ငါးဈေးကွက် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာရန်မှာ ၃ လ ခန့် အနည်းဆုံး ကြာလိမ့်မည်၊ ပြည်ပ ငါးပို့မှုကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်သည်ဟု ပြည်တွင်းမှ စီးပွားရေး ပညာရှင်များက သုံးသပ်ကြသည်။
မုန်တိုင်းအပြီး ၃ ပတ်အကြာ အနံ့အသက်များ ဆိုးရွား
သောကြာနေ့၊ မေလ 23 2008 23:11 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ မုန်တိုင်ဒဏ်သင့် ကျေးရွာများနှင့် မြစ်ချောင်းတလျှောက် ၃ ပတ်ခန့် ကြာမြင့်သည်အထိ ရှင်းလင်းသူမဲ့ ရုပ်အလောင်းများကြောင့် အနံ့အသက်များ ဆိုးရွားစွာ ထွက်ပေါ်နေသည်။
ဟိုင်းကြီးကျွန်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဖျာပုံ၊ လပွတ္တာနှင့် ဘိုကလေးမြို့အနီးရှိ ကျေးရွာများတွင် ပြန့်နှံ့နေသည့် လေဘေးသင့် ရုပ်အလောင်းများကြောင့် အနံ့အသက်များ ဆိုးရွားစွာ ထွက်ပေါ်နေကြောင်း ယင်းဒေသများတွင် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသူများက ပြောဆိုကြသည်။
“ဖျာပုံ တဖက်ကမ်း ဒေးဒရဲမြို့နယ်အတွင်းမှာ၊ ဖျာပုံ မြစ်ဝ ကမ်းရိုးတမ်းတလျှောက် ကျေးရွာ တော်တော်များများမှာ လူသေ အလောင်းတွေကို ရှင်းလင်းသူမရှိလို့ ပုပ်တဲ့ အနံ့အသက်တွေ ရှိနေတယ်” ဟု ဖျာပုံဒေသ လေဘေး ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်နေသူ ရန်ကုန်သားတဦးက ပြောသည်။
ဖျာပုံအထွက် မြစ်ကျင်း၊ မြစ်တန်း၊ မှော်ဘီ၊ အချာကြီး၊ အချာလေး၊ လိပ်တလန်ချောင်း၊ စွယ်တော်ကုန်း၊ လေးအိမ်တန်း၊ ဆိတ်လေးကုန်၊ တံတားကြောင်း၊ မြစိမ်းငယ်နှင့် ကွမ်းမှုံကျေးရွာ တလျှောက်တွင်လည်း အလောင်းများ တွေ့ရဆဲ ဖြစ်သည်။
“ဖျာပုံအထွက် မြစ်ကျင်း၊ မြစ်တန်းမှာ ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့ သူတွေဆိုရင် စာရင်းတောင် မရှိတော့ဘူး။ အကုန်လုံး သေကုန်ကြတယ်။ အဲဒီဒေသမှာဆိုရင် အပုပ်နံ့တွေက အရမ်းကို နံနေတာ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ဟိုင်းကြီးကျွန်း အနီးရှိ ပြင်ခရိုင် ချောင်းဝအုပ်စု၊ ကန်ဆိပ်၊ စက်ဆိပ်၊ ပြင်းဆိပ်နှင့် ဆားကုန်ကျေးရွာများတွင်လည်း အနံ့အသက်များ မကောင်းပုံကို ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်း လုပ်နေသူ တဦးက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရ ကိုယ့်ဥပေဒေ ကိုယ်လိုက်နာပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးရမည်ဟု လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့မှ ပြောကြား
စနေနေ့၊ မေလ 24 2008 14:28 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ မြန်မာစစ်အစိုးရသည် ကိုယ်ထုတ်ထားသည့် ဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာ၍ စနေနေ့တွင် ထိန်းသိမ်းမှု သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မည် ဖြစ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချက်ချင်း လွှတ်ပေးရန် အမေရိကန်အခြေစိုက် Freedom Now လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ကြီးက သောကြာနေ့တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေအရ သူ့ကို ထိန်းသိမ်းမှု သက်တမ်းသည် မေလ ၂၄ ရက်နေ့ သန်းခေါင်ယံတွင် တရားဝင် ကုန်ဆုံးမည် ဖြစ်သဖြင့် ထိုဥပဒေနှင့်အညီ သူ့ကို လွှတ်ပေးရမည်ဟု Freedom Now ၏ ဥက္ကဋ္ဌ Jared Genser က ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
“စစ်အစိုးရအနေနဲ့ သူ့ကို လွှတ်မပေးဘူးဆိုရင် ကိုယ်ထုတ်ထားတဲ့ ဥပဒေကို ကိုယ် ပြန်ပြီး ချိုးဖောက်တာ ဖြစ်နေမှာပဲ” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိသားစုဝင်များ၏ ညွှန်ကြားချက်အရ သူ၏ ဥပဒေ အကျိုးဆောင်လည်း ဖြစ်သူ Genser က ပြောသည်။
၁၉၇၅ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက် ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ရန်မှ ကာကွယ် တားဆီးသည့် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁ဝ (ခ) အရ ‘နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာနှင့် လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက် အန္တရာယ်ပြုသူ၊ အများပြည်သူ၏ ငြိမ်းချမ်းမှုကို တားဆီး နှောင့်ယှက်သူဟု ယူဆရသူ မည်သူမဆို အများဆုံး ၅ နှစ်အထိ တားဆီး ကန့်သတ်မိန့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။ ထိုအမိန့်ကို တနှစ်လျှင် တကြိမ် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ရမည်’ ဟု ပြဋ္ဌာန်း ဖော်ပြထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နောက်ဆုံးအကြိမ် ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် မေလတွင် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီး၊ ယခု မေလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် အကျဉ်းစံသက်တမ်း ၅ နှစ်ပြည့်မြောက်မည်။ သူသည် လွန်ခဲ့သော ၁၈ နှစ်အတွင်း ၁၂ နှစ်ကျော် ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။
“ထိန်းသိမ်းမှု သက်တမ်းကို ဆက်ထားဖို့ စစ်အစိုးရမှာ ဘာဥပဒေ အခွင့်အရေးမှ မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ ဆက်ဖမ်းထားမယ် ဆိုရင် ဒါဟာ ကိုယ်ထုတ်ထားတဲ့ ဥပဒေကို ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ချိုးဖောက်တာပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်” ဟု Genser က ပြောသည်။
သူ၏ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) မှ အခြား ခေါင်းဆောင်များကလည်း သူတို့ပါတီ ခေါင်းဆောင်ကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကို အစဉ်တစိုက် ကန့်ကွက် ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပြီး ဖမ်းဆီးထားသည်မှာ တရားမဝင်ကြောင်းနှင့် လွှတ်ပေးရန်ကိုလည်း တိုက်တွန်း တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
“ဒါပေမဲ့ အစိုးရက ဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာမှုမရှိဘဲ သူ့ကို ဆက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်” ဟု NLD ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
“တကယ်လို့သာ ဒီတကြိမ်လည်း ထိန်းသိမ်းမှု သက်တမ်းကို ထပ်တိုးခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ အစိုးရဟာ ဥပဒေစိုးမိုးမှုကို လေးစားလိုက်နာမှု မရှိဘူးဆိုတာ ပြသရာ ရောက်ပါလိမ့်မယ်” ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆက်ပြောသည်။
ဤအတောအတွင်း Human Right Watch ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့် စစ်အစိုးရသည် ဥပဒေကို ခြယ်လှယ် ချိုးဖောက်နေသည်ဟု ဆိုလိုက်သည်။
ဥပဒေကို ဤကဲ့သို့ လိုသလို ခြယ်လှယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုလျှင်ပင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထိန်းသိမ်းမှု သက်တမ်းသည် စနေနေ့တွင် ကုန်ဆုံးတော့မည် ဖြစ်သည်ဟု (HRW) ၏ မြန်မာပြည်ရေးရာ အတိုင်ပင်ခံ David Scott Mathieson က ပြောသည်။
“စစ်အစိုးရ အနေနဲ့ လွှတ်ကို လွှတ်ရမယ်။ ဒီလိုပြောတာက ဥပဒေက ဒီအတိုင်း ဆိုထားလို့သာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါ လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့် မှန်ကန်တဲ့ ကိစ္စလည်း ဖြစ်လို့ပဲ” ဟု Mathieson က ပြောသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ စစ်တပ် အသိုင်းအဝိုင်းမှ ရရှိသော သတင်းအရ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများသည် နောက်ထပ် တနှစ် ဆက်လက် တိုးမြှင့်ရန် ပြင်ဆင် လုပ်ဆောင်နေကြပြီး၊ ယင်းကို စနေနေ့တွင် ကြေညာဖွယ် ရှိသည်။ ဤသည်မှာ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည့် ကုလနှင့် အာဆီယံ ပူးတွဲကျင်းပမည့် အလှူရှင်များ ကွန်ဖရင့် မတိုင်ခင် ၁ ရက်အလို ဖြစ်သည်။
“ဒီ့ထက်ကောင်းတဲ့ အချိန် မရှိတော့ပါဘူး” ဟု Genser က သောကြာနေ့က ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
အကယ်၍ မြန်မာစစ်အစိုးရသာ သူတို့ ဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာခဲ့မည်ဆိုလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ရန်ကုန်မြို့တွင် တနင်္ဂနွေနေ့၌ ကျင်းပမည့် နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်များ ကွန်ဖရင့်သို့ တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
“သူ့ကို လွှတ်ပေးဖို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေက ငြင်းဆန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းနဲ့ အာဆီယံ သံတမန်တွေရဲ့ မျက်နှာကို ဖြတ်ရိုက် ခံလိုက်ရသလို ဖြစ်မှာပဲ။ ဒီသံတမန်တွေက စစ်အစိုးရက တောင်းခံမယ့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံဖိုး နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေကို နားထောင်ဖို့ ရောက်လာမှာမို့ပါ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
မဲလိမ်မှုများအပေါ် တရားစွဲဆိုနိုင်ရန် ဒီချုပ်ပြင်ဆင်နေ
သောကြာနေ့၊ မေလ 23 2008 16:46 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲများတွင် မဲလိမ်မှုများ ရှိခဲ့သည်ဆိုကာ အဓိက အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး ပါတီကြီး ဖြစ်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က တရားစွဲဆိုပြီး စစ်အစိုးရ ထုတ်ပြန်ထားသော မဲရလာဒ်ကို ပယ်ဖျက်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်မှု ပြုလုပ်လျှက် ရှိသည်။
မြို့နယ် ၄၇ မြို့နယ်မှအပ တနိုင်ငံလုံးတွင် မေလ ၁ဝ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သော ဆန္ဒခံယူပွဲအတွင်း မဲလိမ်မှု အမျိုးမျိုး လုပ်ခဲ့သည် ဆိုခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မျက်မြင်သက်သေများ၏ ထွက်ဆိုချက် အထောက်အထားများကို စုစည်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကျနော်တို့ သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံရအောင် လုပ်နေတယ်။ အချက်အလက်တွေ ပြည့်စုံရင် ဥပဒေနဲ့အညီ ဖြစ်နိုင်ဖို့ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ကြမယ်၊ သူတို့ရဲ့ လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေ မဲလိမ်လည်မှုတွေ အားလုံး အသေးစိတ် တပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ရအောင် စုစည်းနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်တွေ မြို့နယ်၊ တိုင်း အားလုံးကို အချက်အလက်တွေ ရဖို့ စုစည်း ခိုင်းထားတယ်။ တချို့လည်း ရပါပြီ” ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ဗဟို) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အဖွဲ့ချုပ်တွင် လက်ရှိအားဖြင့် ပဲခူးတိုင်း ကဝမြို့နယ်တွင် ရပ်ကွက်ကြီး ၆ ခုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု ၉၆ အုပ်စုအတွင်းက မဲလိမ်မှုများအကြောင်း စုစည်း ထားရှိပြီး ဖြစ်သည်။
ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းက “ဒီလုပ်ရပ်ကတော့ အစိုးရကို တရားစွဲရင်၊ တရားမကြောင်းအရ တရားစွဲရင် စွဲလို့ရမှာပေါ့။ Notice စာထုတ်ပြီး တရားစွဲရမှာပဲ။ ခွင့်ပြုတာ မပြုတာ ရှိမယ်။ တရားစွဲဆိုခွင့်တော့ ဥပဒေအရ ပြဋ္ဌာန်းထားတာပဲ” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပဲခူးတိုင်းက ပေးပို့လိုက်သည့် မဲလိမ်မှု လျှောက်လဲစာတွင် ဆန္ဒခံယူပွဲနေ့ မဲပေးရာတွင် ကိုယ်စားမဲပေးခွင့် ပြုလုပ်ခိုင်းခြင်းများနှင့် မဲရုံမှူးများ ကိုယ်တိုင် အစားထိုးမဲများ ထည့်ခြင်းတို့အကြောင်း သက်သေ ထွက်ဆိုချက်များ ပါရှိသည်ဟု မဇ္ဈိမက စုံစမ်း သိရှိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီ (ဘီအယ်စီ) နှင့် အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းများကလည်း ဆန္ဒခံယူပွဲများတွင် မဲလိမ်မှုများ ရှိခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲ ပြောဆိုထားပြီး သက်သေ အထောက်အထားများ စုဆောင်းနေသည်။
“မဲလိမ်လည်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပမှာပေါ့နော်၊ ပထမဆုံး အနေနဲ့က သက်သေခံချက်တွေကို ပို့ဖို့အတွက် လုပ်နေပါတယ်။ အထဲမှာသွားပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လေ့လာခဲ့တဲ့ သက်သေခံ အထောက်အထား ယူခဲ့တာတွေ ရှိတယ်ပေါ့နော်။ အဲလိုပဲ တခြားအတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းပဲ သက်သေ အထောက်အထားတွေကို ပူးပေါင်းပြီးတော့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ကျနော်တို့ လုပ်နေပါတယ်” ဟု ရှေ့နေများ ကောင်စီမှ ဦးသိန်းဦးက ပြောသည်။
သူက ဆက်ပြီး “အားလုံးက ဒီကိစ္စကို ပြိုင်တူ ဝိုင်းပြီးတော့ တွန်းဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလို ဝိုင်းတွန်းမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ တစုံတရာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်လိမ့်မယ်။ တဦးတယောက်ထဲ လုပ်လို့ရမှာ မဟုတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြဖို့ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် သက်တမ်းသည် စနေနေ့တွင် ကုန်ဆုံးမည် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ ဥပဒေအရ ငါးနှစ်ထက် ကျော်လွန်ကာ ချုပ်နှောင်ထားခွင့် မရှိဟု သူမ၏ရှေ့နေ အမေရိကန် အခြေစိုက် ဂျာရတ်ကန်ဆာက ဗီအိုအေ သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒီပဲယင်း အရေးအခင်း ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် မေလတွင် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် နောက်တကြိမ် ပြန်လည်ချထားခဲ့သည်။ ဒေါ်စုသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် နေအိမ် အကျယ်ချုပ်သက်တမ်း ၁၁ နှစ် ကျော်မြင့်ပြီ ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံတော် နှောင့်ယှက် ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ အန္တရာယ် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေဖြင့် ဖမ်းဆီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဥပဒေကို ၁၉၇၅ ခုနှစ် စတင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့စဉ်က တကြိမ်လျှင် ရက်ပေါင်း (၁၈၀) နှင့် အများဆုံး (၃) နှစ်ထိ ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင့်ခွင့် ရှိသည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ တဖန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပထမအကြိမ် အကျယ်ချုပ်ကျနေသည့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် အများဆုံး (၅) နှစ်ထိ ချုပ်နှောင်ထားနိုင်သည်ဟု စစ်အစိုးရက ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
တနင်္ဂနွေနေ့၊ မေလ 25 2008 16:07 - မြန်မာစံတော်ချိန်
Federal Government $2,000,000
World Vision 1,500,000
Canada Red Cross 1,200,000
Ontario Government 100,000
United Church of Canada 100,000
Toronto Burma Relief Committee 56,000
Salvation Army—Canada 50,000
Development and Peace 50,000
Primate’s World Relief and Development Fund 30,000
Vancouver Burma Relief Committee 26,000
Yukon Government 25,000
Steelworkers Union 20,000 အလှုငွေရထားတယ်
ကနေဒါကသဘောင်္၂စီးOn the way မှာ..လေယာဉ်တစီးနဲ့ကူမဲ့လူတွေကbkkမှာ..
Come onnnnn ! မောင်သန်းရွှေ Let them go..you can't help my people...
SHAME ON YOU...SHAME ON YOU.../
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/25/2008 1 အကြံပြုခြင်း
အေးချမ်းမြေ့ | မေ ၂၄၊ ၂၀၀၈
ကိုပေါက်စ သူငယ်ချင်းတဦး၏ ဘခင်က ဆေးမှူးတဦးဖြစ်သည်။ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသည့် ဧရာဝတီတိုင်းတွင် တာဝန်ကျသည်။ အဲဒီဘက်မှာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဒုက္ခသည်စခန်းများ ရှိနေသည်၊ အကူအညီ လိုအပ်နေ သည်ဟု ကြားရသောကြောင့် သူတို့သူငယ်ချင်းတစု သွားရောက် လှူဒါန်းရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်။
သူတို့သန်လျင်မြို့လေးမှာတော့ ကိုပေါက်စတို့အဖွဲ့လေးကို ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသော အဖွဲ့လေးအဖြစ် လူသိများသည်။ တရားပွဲများဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ကူညီပေးသလို စာသင်တိုက်များ ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ပတ်သက်သမျှ တတ်အား သရွေ့ ကူညီနေသည့် လူငယ်များဖြစ်သည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကို သူတို့ သန်လျင်မြို့ကလေးလည်း ခံလိုက်ရတော့ သူတို့အဖွဲ့ မနေနိုင်။ သူတို့ထဲမှာ အသက်အကြီးဆုံး ငွေကြေးလည်း အတောင့်တင်းဆုံးဖြစ်သည့် ကိုထွန်းကဦးဆောင်ကာ အိမ်ခြေရာမဲ့ ဖြစ်သွားသူများအတွက် တာလပတ်စ များကို လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ကြသည်။
ကုန်ကျစားရိတ်များကို သူတို့သူငယ်ချင်းများလည်းထည့်သည်။ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် သူငယ်ချင်းတချို့ လည်း ပါဝင် သည်။ နိုင်ငံခြားရောက်နေသည့် သူငယ်ချင်းများကလည်း ဝိုင်းဝန်းထည့်ဝင်ကြသည်။ ပထမ တသုတ်အတွက် တာလပတ်စ ၈၀ ကို ငွေကျပ် ၇ သိန်းကျော်ကျသည်။ လုပ်လက်စရှိနေပြီဆိုတော့ ဆက် လုပ်ချင်လာသည်။ သူတို့ကို ဝိုင်းပံ့ပိုးမည့် သူများလည်း ထပ်ရလာသည်။
သန်လျင်မြို့ ဘုရားကုန်းကျေးရွာတဝိုက်က ဒုက္ခသည် ၁၅၀ ခန့်ကို ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးတပါးက စောင့်ရှောက်ထား သည်။ ထိုသူများအတွက် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ငရုပ်၊ ကြက်သွန်များ သွားရောက် လှူဒါန်းကြ သည်။ အဲဒီအတွက်က ကျပ် ၃ သိန်းခွဲ စင်ကာပူက သူငယ်ချင်းတစုက ငွေကျပ် ၄ သိန်း ၄ သောင်း နှင့် ထိုင်ဝမ်က သူငယ်ချင်းဇော်လေးက ငွေကျပ် ၃ သိန်း လှမ်းလှူသည်။
ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်းများက ဧရာဝတီတိုင်းဘက် သွားရောက်လှူဒါန်းချင်သည်ဆိုတော့ ကိုပေါက်စ သူငယ်ချင်း တယောက်၏ အဆက်ဖြင့် သူတို့ထိုဒေသကို သွားဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ မေလ ၂၂ ရက်နေ့ နံနက် ၄ နာရီခန့်မှာ သူတို့ကားတွေ သန်လျင်ကစထွက်သည်။ လူအယောက် ၂၀ ခန့် ပါသည်။ ကားက ၄ စီး။
ကိုထွန်း၏ အမတယောက်က ကလေးအင်္ကျီအစုံ ၁၀၀၊ လုံခြည် ၁၀၀၊ အတွင်းခံများ ဝယ်ပေးသည်။ သူတို့ လူစု ရပ်ကွက် ထဲတွင် လိုက်လံအလှူခံလိုက်ရာ ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ ကလေး ၁၀၀၀ ကျော်အတွက် အဝတ် အစားများ ရလာခဲ့သည်။ အထုပ် တထုပ်ထဲတွင် မိန်းမအင်္ကျီ ၃ ထည်၊ လုံခြည် ၁ ကွင်း။ ဒါမှမဟုတ် ယောက်ျားအင်္ကျီ ၂ ထည်၊ လုံခြည် တကွင်း စသည်ဖြင့် ထည့်ထားသည့်အထုပ်ပေါင်း တထောင်ကျော် ရသည်။
ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်းများက ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကြက်သွန်များ ဝယ်လာကြသည်။ တခြားသော ဆေးဝါး၊ ခြင်ထောင်၊ စောင် များနှင့် ပေါင်းလိုက်လျင် သူတို့ ကျပ် သိန်း ၂၀ ဖိုးလောက် ပါသွားခဲ့သည်။
သူတို့ကားတန်းက ရန်ကုန်မှ ညောင်တုန်း ထိုမှတဆင့် ပန်းတနော် ကျောင်းကုန်းထိ လမ်းကကောင်းသည်။ အဲဒီကနေ အိမ်မဲထိကတော့ လမ်းတော်တော်ဆိုးသည်တဲ့။ အိမ်မဲကမှ ရွာသစ်ကို ၁၅ မိုင် ထိုမှတဆင့် လှေဆိပ်ရောက်သည်အထိ ၁၂ မိုင်။ ထို ၂၇ မိုင်ကတော့ အဆိုးရွားဆုံးလမ်းပိုင်းဖြစ်သည်ဟု ကိုထွန်းက ကျမကိုပြောပြပါသည်။
လှေဖြင့် ကျန်းမာရေးမှူးရှိရာ ဆတ္တူရွာသို့ ၁ နာရီခွဲခန့် စီးရသည်။ အဲဒီကမှတဆင့် ဝတလုံးကုန်း ခေါ် သင်္ကန်းကုန်း ရွာသို့ရောက်သည်။ ထိုရွာမှာ သူတို့ ကိုလှဝင်းနှင့် ဆုံရခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုလှဝင်းက အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်။ ဆီစက် ဆန်စက် ပိုင်ရှင်။ ရွာအရေးကို အမြဲအလေးထား လုပ်ဆောင်ပေးသူ ဖြစ်သောကြောင့် လူချစ်လူခင်များသည်။
ဝတလုံးကုန်းက မုန်တိုင်းဒဏ်နှင့်လွတ်သည့်ရွာဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လပွတ္တာ၊ ဘိုကလေးဘက်က ဆိုးရွားလှသည့် သတင်းများကို ကြားနေရသည်။ ကိုလှဝင်း မနေနိုင်တော့ဘဲ စက်လှေတစင်းနှင့် ဒုက္ခသည် များရှိသည်ဟု ကြားသည့် ဒေသများကို သွားကာ ရွာသို့ ခေါ်လာခဲ့သည်။ ခုတော့ သူ့ရွာမှာ ဒုက္ခသည် ၁၅၀ ခန့် ရောက်နေသည်။ အိမ်ခြေ ၇၀ ခန့်သာရှိသည့် ကိုလှဝင်းတို့ ရွာကလေးက အိမ်တိုင်းမှာ ဒုက္ခသည်များကို တင်ကျွေးထားသည်။
ကိုလှဝင်းက ဆန်၊ ဆီ နိုင်သလောက် ထောက်ပံ့သည်။ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် ယောက်ျားတချို့ကို သူ့စက်များတွင် အလုပ် ပေးထားလိုက်သေးသည်။ ကိုထွန်းတို့ ကိုပေါက်စတို့ အဖွဲ့က အဲဒီရွာက ဒုက္ခသည်တွေကို သူတို့ မှာ ပါလာသည့် အဝတ် အထည် အစားအသောက်များ ဝေငှသည်။ ကိုလှဝင်းက သူတို့ကို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသော သတင်းတခုထပ်ပေးသည်။ အဲဒါကတော့ ဝါးခယ်မအပိုင် ကနစိုကုန်း ဆိုသည့်ရွာတွင် ရိုမန် ကက်သလစ် ဘုန်းတော်ကြီးတပါး စောင့်ရှောက်ထားသည့် ဒုက္ခသည် ၁ ထောင်ကျော် ရှိသည် ဆိုသည့် သတင်းပင်။
ကိုလှဝင်းကိုယ်တိုင် သူ့မော်တော်ဖြင့်လိုက်ပို့သောကြောင့် သူတို့အဖွဲ့ ကနစိုကုန်းသို့ ရောက်ရပြန်သည်။ အဲဒီရွာကလည်း မုန်တိုင်းဒဏ်မခံလိုက်ရ။ သို့သော် ဘုန်းတော်ကြီး ဦးမြင့်စိုးက ကိုလှဝင်းနှင့်အတူ မုန်တိုင်း ဒဏ် ခံရသည့် ဒုက္ခသည်များကို လိုက်လံကယ်ဆယ်၍ သူ့ကျောင်းသို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူ့ကျောင်းမှာ ခုထိ ကလေး၊ လူကြီး ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၁၀၄၈ ဦး ရှိသည်။
ကယ်တင်လာခါစက တချို့ အဝတ်ပင်မပါ၊ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကို အဝတ်လို ပတ်ထားရသည်ဟု ကိုလှဝင်းက ပြောပြ သည်တဲ့။
“ရိုမန် ကက်သလစ်ကျောင်းကြီးက အကျယ်ကြီးပဲ။ လူတထောင်ဆန့်ပါတယ်။ တနေ့ကို ဆန် ၁၀ အိတ် အနည်းဆုံး ချက်ရ တယ်တဲ့။ လှူမယ့်သူတွေမလာခင် ရွာထဲက လူတွေရယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးရယ် မျှပြီး ကျွေး တယ်။ ကျနော်တို့ ရောက်တော့ ကုမ္ပဏီ တခုက ပစ္စည်းတွေ ဝေနေတယ်” ဟု ကိုထွန်းက ပြောပြသည်။
ထိုဒေသသို့ အစိုးရ၏ အကူအညီ လုံးဝရောက်မလာသေးကြောင်း သိရသည်ဟုလည်း ဆို၏။
“ဖာသာက နောက်ထပ် ၂ လ၊ ၃ လလောက်တော့ ဒီတိုင်းဆက် ကျွေးထားဦးမယ်တဲ့။ အဲဒီကာလကျော်ရင်တော့ ကိုယ့်ဒေသ ပြန်ချင်လည်းပြန်။ မပြန်ချင်တဲ့ သူတွေကိုလည်း ရန်ကုန်မြို့က သူ့အသိအကျွမ်းတွေဆီ ပို့ပြီး အလုပ်ရှာပေးတန်ရှာပေး၊ ကလေးတွေဆိုရင်လည်း မိဘမဲ့ ဂေဟာတို့ ဘာတို့ သွားဖို့ စီစဉ်ပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်” ဟု ကိုထွန်းက ပြောသည်။
အလှူအတန်းရက်ရောသည့် မြန်မာလူမျိုးတို့ထုံးစံအတိုင်း တတ်နိုင်သူများက ငွေအား၊ ပစ္စည်းအား။ မတတ် နိုင်သူများက လူအားစိုက်ထုတ်ကာ လေဘေး ဒုက္ခသည်များကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီကြတာ တွေ့ရ သည်။ အစိုးရက ထောက်ပံ့ သည်ဖြစ်စေ၊ မထောက်ပံ့သည်ဖြစ်စေ ဂရုမစိုက်။ ပြည်ပက အကူအညီများ ဒုက္ခသည်များထံ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ထိထိ ရောက်ရောက် မရောက်ရှိမှန်းလည်း သိကြသည်။
ရန်ကုန်မြို့က ဂျာနယ်တိုက် တော်တော်များများက သူတို့ ဂျာနယ်များတွင် ကြော်ငြာ၍ လှူဒါန်းလိုသူများထံမှ အကူပစ္စည်း များ လိုက်လံစုယူကာ သွားရောက် ဝေငှပေးသည်ဟု သတင်းရပ်ကွက်မှ ကြားသိရသည်။ ခုထိ ဂျာနယ်တိုက်တတိုက်စီကို စုဆောင်းကာ လှူဒါန်းပေးပြီးသည့် တန်ဖိုးပေါင်း ကျပ် သိန်း ၁၀၀ စီရှိပြီဟု အယ်ဒီ တာ တဦးကပြောပြသည်။ ဂျာနယ်များ အားလုံး စုဆောင်းကာလှူဒါန်းပြီးသည့်တန်ဖိုး ကျပ် သိန်း ၁၀၀၀ ဖိုးခန့်ရှိပြီတဲ့။
ကျမအသိ ဂျာနယ် အယ်ဒီတာတဦးကလည်း သူ့မြို့က သူငယ်ချင်းများ၊ ဆွေမျိုးများဆီမှ ကောက်ခံ စုဆောင်းကာ ရန်ကုန် ရောက်နေသည့် သူငယ်ချင်းများနှင့် စုပေါင်း၍ အပတ်စဉ် သွားရောက်လှူဒါန်းသည်။ ကွမ်းခြံကုန်း၊ ဒေးဒရဲ ဘက်များကို အဓိက သွားဖြစ်သည်ဟု သူကပြောပြသည်။ သူတဦးတည်း စုဆောင်း ကောက်ခံရသည့် ပစ္စည်းနှင့် ငွေတန်ဖိုး ကျပ် သိန်း ၂၀ ခန့်ရှိပြီဟု ဆိုသည်။
ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားများ၏ လှူဒါန်းမှုကလည်း ကြားရသူကို ပီတိဖြစ်စေသည်။ တတ်နိုင်သူများကငွေကြေးပစ္စည်း များဖြင့် ပါဝင်သည်။ မတတ်နိုင်သူများက လူအားဖြင့် ကူညီသည်ဟု သရုပ်ဆောင် ငှက်ပျောကြော်က ပြောပြ သည်။ ကိုငှက်ပျောကြော် ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့တွင် လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ကိုလူချောတို့ အဖွဲ့ ပါသည်။ တခြား အဖွဲ့များလည်း ရှိသည်။ ကားရိုက်နားထားသော သရုပ်ဆောင်တိုင်း လိုလို ကိုယ့်အဖွဲ့နှင့်ကိုယ် နေ့စဉ် လှူဒါန်းရန် ထွက်ကြသည်တဲ့။
သူတို့ ရုပ်ရှင်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် စီးပွားရေးသမားများ၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ထိုသူများနှင့် တဆင့် ပြန်လည် ပတ်သက်သူများက ငွေကြေး နှင့် ပစ္စည်းများ အားပါးတရ ပေးလှူကြသည်။ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ငရုပ်၊ ကြက်သွန်၊ မုန့် စသည့် စားစရာများလည်းပါသည်။ ဖရောင်းတိုင်၊ ဆပ်ပြာ၊ ခြင်ထောင်၊ စောင်၊ အဝတ်အထည်၊ အိုးခွက်ပန်းကန် စသည့် အသုံးအဆောင် များလည်းပါသည်။
“ကျနော်တို့ကနေ တဆင့် လှူတာ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲတောင် မပြောတတ်တော့ဘူး။ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း အဖွဲ့လေး၊ ငါး ဖွဲ့က ပစ္စည်းတွေ အများကြီး လှူနေကြတာ၊ အခုတောင် ပစ္စည်းတွေ ကားပေါ်တင်နေတာဗျ” ဟု သရုပ်ဆောင်များကို ဦးဆောင်ကာ ခန့်ခွဲပေးနေသည့် ကိုဇာဂနာက ပြောသည်။ အတတ်နိုင်ဆုံး လူသူ ရောက်ရန်မလွယ်ကူသော ဒေသများသို့ ရှာဖွေသွားရောက် လှူဒါန်းကြသည်ဟု သူက ဆက်ပြောပြသည်။
တတ်နိုင်သော မိသားတစုချင်းစီ၊ ကုမ္ပဏီတခုချင်းစီကလည်း အားလပ်ရက်များတွင် ဧရာဝတီတိုင်းဘက်သို့ သွားကာ ပေးကမ်းလှူဒါန်းကြသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းသမားတဦးကပြောပြ သည်။
မေ ၂၄ ရက်နေ့တွင် လက်ကီးဆဲဗင်း ရုပ်ရှင်မှ ထုတ်လုပ်သည့် “ဟော့ရှော့” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ရန်ကုန်မြို့ သမ္မတ ရုပ်ရှင် ရုံနှင့် မန္တလေးမြို့ဝင်းလိုက်တို့တွင် ရုံတင်ပြသကာ ထိုနေ့တရက်ရရှိသည့် အမြတ်ငွေများကို လေဘေးဒုက္ခသည်များအား လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၃ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ဖော်ပြ ထားတာ တွေ့ရသည်။
ပြည်ပရောက် မြန်မာများကလည်း တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းကြတာတွေ့ရသည်။ နီးစပ်ရာ နီးစပ်ရာ လှူကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျမကိုလည်း စင်ကာပူက သူငယ်ချင်းတယောက်က လှမ်းမေးသည်။ သူတို့ ငွေကောက်ခံဖို့ လွယ်ကူရန် စနစ်တကျ စာရင်းပြုစုပေးနိုင်သူတဦးကို လွှဲချင်သည်ဟုဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း ငွေပါဝင်ကာလှူဒါန်းနေသည့် သူငယ်ချင်းတဦးနှင့် ဆက်သွယ်ပေးလိုက်သည်။
ကျမဆက်သွယ်ပေးလိုက်သည့်သူငယ်ချင်းက ကုမ္ပဏီကြီးတခုမှာ စာရင်းကိုင်လုပ်သည်။ စင်ကာပူက သူငယ်ချင်းနှင့် သူတို့ချင်း အီးမေးလ် အဆက်အသွယ်ဖြစ်ကာ အဆင်ပြေသွားသဖြင့် ပါးစပ်ကလေးစိုက်၍ ဆက်သွယ်ပေးလိုက်ရသော ကျမ ကြားက ပီတိဖြစ်ရသည်။
ကိုထွန်းတို့ အဖွဲ့ ဖာသာ ဦးမြင့်စိုး၏ ကျောင်းမှာလှူဒါန်း ဝေငှပြီးတော့ ညနေစောင်းလုပြီ။ မြောင်းမြမြို့စွန်က မြစိမ်းတောင် ဆရာတော်ဆိုတဲ့ ဆရာတော်တပါးက လူ ၃၀၀၀ ကျော်ကို တာဝန်ယူ ကျွေးမွေးထား သည် ဆိုသည့် သတင်း သူတို့ကြားရ ပေမယ့် အဲဒီထိသွားဖို့ အချိန်မရှိတော့ ပြန်လာခဲ့ရသည်။ နောက်တခေါက်ဟု တေးထားလိုက်ကြသည်။
အပြန်လမ်းမှာတော့ ဘာသာမတူ လူမျိုးမတူပေမယ့် ရည်ရွယ်ချက်ခြင်းတူကြသည့် ဦးမြင့်စိုး၊ ကိုလှဝင်းနှင့် သူတို့အဖွဲ့ ဆုံဖြစ်ပုံကို ပြန်ပြောဖြစ်ကြသည်။ သူတို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ၂၃ ရက်နေ့ နံနက် ၂ နာရီပင် ကျော်လုပြီ။ ပင်ပန်းပေမယ့် သူတို့အားလုံး ပီတိဖြင့် လန်းနေကြပါသည်။
နိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများ မြန်မာပြည်ဝင်ခွင့် ရရေး မရှင်းသေး
မြန်မာပြည်က လေဘေးဒုက္ခသည်များအား ကယ်ဆယ် ထောက်ပံ့မယ့် နိုင်ငံခြားက အလုပ်သမားများဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ ကတိအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ၀င်ခွင့်ရဖို့ စောင့်ဆိုင်း နေကြပါတယ်။ စနေနေ့မှာ အဲဒီအလုပ်သမားများက လေဘေးဒဏ် အကြီးအကျယ် ခံရတဲ့ ဧရာဝတီ တိုင်းကို သူတို့ သွားရောက်ခွင့် စောင့်နေရတယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက လေဘေး ဒုက္ခသည်များအတွက် ကယ်ဆယ် ထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်များ ထားရှိဖို့ အခြေစိုက် စခန်းတစ်ခု ထိုင်းမြို့တော် လေဆိပ်မှာ မနေ့က ကုလသမဂ္ဂက ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး နောက်တနေ့ ဘန်ကောက်မြို့ ဒွန်မောင်း လေဆိပ်မှာ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက အဲဒီလို နေရာသတ်မှတ် စခန်းဖွင့်ပေးလိုက်တာပါ။
ကျွမ်းကျင်သူ နိုင်ငံခြားသား ကယ်ဆယ်ရေး အလုပ်သမားများ အားလုံး မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ၀င်ခွင့်ပြုဖို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက သဘောတူလိုက်ကြောင်း သောကြာနေ့မှာ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ပြောဆိုပါတယ်။ အဲဒီအချိန်အထိ နိုင်ငံခြား ကယ်ဆယ် ထောက်ပံ့ရေး ၀န်ထမ်းများ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လေဘေးသင့် ဒေသများ သွားရောက်ပြီး အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ဆောင်ခွင့် စစ်အစိုးရက ကန့်သတ်ချုပ်ချယ် ပိတ်ပင်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စနေနေ့မှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လေဘေးသင့်တဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း နယ်တချို့မှာ ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမူကြမ်း လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပ ပြုလုပ်ပါတယ်။
ဆိုင်ကလုန်း လေပြင်းမုန်တိုင်းကျလို့ သေကျေပျက်ဆီး များလွန်းနေတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံတကာက ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကပဲ စစ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံကျန်ဒေသများက မေလ ၁၀ ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းပုံ မူကြမ်း လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲဆီ ဦးတည်သွားစေမယ့် အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံမူကြမ်းကို မဲဆန္ဒရှင်များက တခဲနက် ထောက်ခံခဲ့ကြတယ်လို့ စစ်အစိုးရက ကြေညာခဲ့ပြီး အတိုက်အခံများ၊ လူအခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများကတော့ စစ်တပ် အာဏာမြဲရေးအတွက် ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ မူကြမ်းဖြစ်တယ်လို့ ဝေဖန် နေကြပါတယ်။
မနက်ဖြန် ရန်ကုန်မြို့မှာ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အာဆီယံတို့ ပူးတွဲ ကမကထ ပြုလုပ်မယ့် အလှူရှင်များ စည်ဝေးပွဲသို့ ဘန်ကီမွန်း တက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံ တောင်းဆိုထားပါတယ်။